လုပ်ငန်းခွင်ထဲက ဘ၀များ….. – Grab Love Story
ဒီနေ့ ဌာကို မန်နေဂျာ အသစ်ရောက်လာမည် ဆိုသောကြောင့်….. ဝင့်ဝါ အပါအဝင် အားလုံး စိတ်လုပ်ရှားနေကြသည်….
လက်ရှိ မန်နေဂျာ မမကြီးက အပေါက်ဆိုးလွန်းလှသည်………. ဒါကြောင့် နောက်လာမည့် မန်နေဂျာ လူကြီးကို မျှော်နေသည်မှာ ကြာပြီ
ဝင့်ဝါဒို့ ဌာနဆို…..လူကြီး တွေက မလာချင်ကြ………… အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရတာ မှန်ပေမယ့်Target တွေကြားမှာ စိတ်ဖိစီးမှု များလှသည်.။
ယခု လာမည့် မန်နေဂျာ အသစ်က နိုင်ငံခြားပြန်ဆိုတော့…… စိန်ခေါ်မှု အသစ်ကို လိုချင်လို့သာ ဒီအလုပ်ကို လက်ခံခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရသည်……..။
ဝင့်ဝါက အရောင်း ဌာနရဲ့ executive , ရာထူး တူသူတွေထဲမှာ အငယ်ဆုံး……….
ဌာနမှာကလည်း…………… မိန်းကလေးက များပြီး………ယောက်ျားလေးဆိုလို့ နှစ်ယောက်သာ ရှိသည်…. ရှိသည့် နှစ်ယောက်ကလည်း………….. မိန်းမလျာ ပုံစံလေးတွေ……….. သိပ်အားကိုးလို့လည်း မရ…………
ဒီနေ့………….. မန်နေဂျာ အသစ်လာမည်ဆို၍ စပယ်ရှယ် ပြင်လာခဲ့သည်………..ပါးလွှလွှ ယူနီဖောင်း အဖြူ ရောင်အောက်မှာ
ဇာ ဘရာစီယာ အနက်လေးကို ဝတ်ထား၍ ……….. အပြင်က ကြည့်လျှင် လျှံကျလုနီးပါး ရင် အမွှာကို အထင်တိုင်း မြင်ရ၏ ။
အားလုံးနီးပါးကလည်း………… သူ့လိုဘဲ…….ဒီနေ့ နည်းနည်း ဆက်ဆီ ကျနေသည်…..။
အပျိုကြီး…………….မအိ ဆို……..ပို၍ပင် ဆိုးသေးသည်…..။
အကျီက ပါးသည့်ကြားထဲ………….အပေါ်ဆုံး ကြယ်သီးကို မတပ်ထား၍…………..နို့အုံကြီး အဖွေးသားကို အဝေးကပင် မြင်နိုင်၏ ။
မအိက တခုလပ်……………သူ့ယောက်ျား ဆုံးသွာားသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်….ကလေးတစ်ယောက်တည်းရှိ…… သူက စကားပြော ပက်စပ်သည်………………….တရုံးလုံးကလည်း သူ့ လက်ချာာ မိထားလို့လား မသိဘူး….
စကားပြောလိုက်ရင် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက်……………………သာမန်ယောက်ျားလေးတွေပင် သူတို့နဲ့ ယှဉ်မပြောရဲ……
လာမည့်လူက လေးဆယ်ကျော်ဆိုရင်တော့ ငါ့အတွက်ဘဲနော်တဲ့……………..ငါလည်း ငတ်နေတာကြာပြီ လေးဆယ်အောက်ဆို……….ညည်းတို့ ဝေစားမျှစားပေါ့……………။
ဒို့ HR ကလည်း…………… သေချာ ပြောပြထားတာ မဟုတ်ဘူး………… ဘယ်လို ပုံစံ ဆိုတာ
အဖိုးကြီး ……….အပျော့်ကြီးနဲ့ တိုးနေလို့ ရောဂါ ပိုဆိုးနေအုံးမယ်………။
လေးဆယ်ကျော်ဆို ပုံဆိုးပန်းဆိုး အဖိုးကြီး ဖြစ်ပါစေရှင်……………. .အခန်းထောင့်က သော်တာ အသံက ထွက်ပေါ်လာသည်…။
ဒါကြောင့် နင်တို့ ရောင်းအား ကျတာဆိုပြီး……….. မအိ အသံစူးစူးဝါးဝါး ပေါ်ထွက်လာသည်……..။
တံခါးဖွင့်သံကြောင့်…………..အားလုံးက…………. အခန်းဝကို ဝိုင်းအုံကြည့်နေကြတုန်း……. မင်္ဂလာပါ ဆိုသည့် ………တည်ကြည်သည့် အသံ……………..က ထွက်ပေါ်လာသည်…….။
အေးလှပါသည်ဆိုသည့် သီတာပင် …..စားပွဲက ဝုန်းကနဲထခါ တံခါးပေါက် ကို လှည်းကြည့်လိုက်သည်…..။
အသက်ကလည်း သုံးဆယ် ဝန်းကျင်…….
အရပ်က ၅ ပေ ၁၀ လက်မ လောက်တော့ ရှိမည်ထင်သည်……
အသားညို ညို……….. ဘော်ဒီတောင့်တောင့်…. နှင့် ယူနီဖောင်းဝတ်ထားည်မှာ စမတ်ကျလှသည်……။
ဒီရုံးကို ရောက်လာတဲ့ မန်နေဂျာ အသစ်ပါ………
ကျေးဇူး ပြု၍ မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး………………….ဆိုသည့် စကားသံ အဆုံးမှာ……….
သူက…………….မအိ…..သူက…သီတာ…….သူက…သော်တာ.သူက အစရှိသည်ဖြင့် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်မိတ်ဆက်ပေးနေသည့်
အသံစာစာနှင့်……..ဝင့်ဝါ အသံ အဆုံးတွင်…………အခန်းထဲက မိန်းကလေးတွေ မျက်စောင်းကသူ့ထံ
ဝင့်ဝါတို့ကတော့ သွက်တယ်ဟေ့…………….. ဒို့ဆရာ အသစ်ကလည်း…………. မိုက်တော့ ဝိုင်းလုကြမှ မြင်ယောင်သေးတယ်…………..။ ခြေမတော့ မမြင်ရလို့ မသိရသေးဘူး…. ပုံစံကတော့ ငါ့ယောက်ျားထက် သာမယ့် ပုံမျိုး ဆိုသည့် ဆိုသည့် မအိ အသံ အဆုံးအားလုံးက ပြုံးကြလေသည်.။
ညဏ်လင်းထက်………… မအိ ပြောပုံဆိုပုံကြည့်ပြီး…….နည်းနည်းတော့ ကျွတ်သွားသည်…။
ဒီဌာန အကြောင်း ကြားဖူးသည်…….အလုပ်လုပ်တာ တော်ပေမယ့် ပါးစပ်အရမ်းကြမ်းတယ်လို့ နံမည်ကြီးလှသည်….။
ပါးစပ်ကသာ ကြမ်းတယ် ပြောရမည်…………အကုန်လုံးနီးပါးက တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် နှင့် ချစ်စရာ ပုံစံလေးတွေပင်…..
ဝင့်ဝါဆို………….. မော်ဒယ်မလေး အလားပင်………
ချော်လဲ ရောထိုင်မှ အဆင်ပြေမည့် အနေအထားဆိုတော့………..
ဟုတ် မအိရေ…………..သိချင်ရင်တော့ နောက်မှ စမ်းကြည့်ပေတော့………….
အခုတော့ အလုပ်လေးတွေ စလိုက်ရအောင်………….
တစ်ယောက်လောက် ကျနော်တို့ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းလေးတွေ အကြောင်း နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါလား………။
စကားသံ မဆုံးသေး………….ဝင့်ဝါက အတော်သွက်နေသည်………
ကိုယ်တိုင်လည်း အံ့သြမိသည်…………..ဒီဘဲကြီးကိုများ ခိုက်နေလို့လား……..သူငယ်ချင်းတွေကိုဘဲ စချင်လို့လား ကိုယ်တိုင်ပင် ခွဲမရ………..။ ဘဲကြီးက မချောပေမယ့်……………….. ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဆိုတော့ ခန့်ခန့်ထည်ထည်ပင်…..။
ဝင့်ဝါရဲ့ အကျင့်ကလည်း ………ကိုယ့်ထက်ငယ်သူဆို လုံးဝ စိတ်မဝင်စား…………..ဒီလို အသက်ကြီးပိုင်းမှ ပိုရင်ခုန်သည်…..။
သူ့အခန်းထဲ ဝင်သွားတုန်း…………အပြင်မှာ စုရုန်းပြီး…အတင်း တုတ်လို့……ကောင်းနေတုန်း. မဝင့်ဝါ ခဏလောက် ဆိုတဲ့ အသံကြားတော့…….ဝင့်ဝါ မပြေးရုံတမယ်…….. အထဲဝင်သွားသည်….။
ပြေးဝင်လာတဲ့ ဝင့်ဝါကို ကြည့်ပြီး အောက်က လီးတောင်လာသည်………
တုန်နေတဲ့ ရင်အမွှာက အောက်က ညီလေးကို စိတ်ထစေသည်……….
လုံးဝန်းနေတဲ့ တင်လေးက………………. လုပ်လို့ ကောင်းမည့် ဟာလေးလို့ တွေးရင်း……ပြောစရာ စကားပင် ဆွံ့အနေသော ညဏ်လင်းထက်က
ညီမတို့နဲ့ တစ်ယောက်ချင်း စကားပြောချင်လို့ပါ……..ဒီအလုပ်ပေါ် ခံစားချက်လေး………..ပြောပြပေးပါလား..။
မြူးနေသောာ ဝင့်ဝါ…….သူ့အကြည့်တွေကို တကယ် ကြိုက်သည်……..စကားပြောပုံက လူကြီးဆန်လို့ သူမျက်နှာက
ခက်ထန်နေပုံရပေမယ့် သူပြုံးလိုက်ရင် အရမ်းကြည့်ကောင်းသည်………..မေးရိုးကားကားကြီးများက သူဘယ်လောက် ဒုတ်ထွားနိုင်လည်းဆိုတာ စဉ်းစားလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ မအိစကား သတိရလို့ ပြုံးရင်း……..လျှာလေး တစ်လစ် ဖြစ်သွားသည်……..။
ဒီကောင်မလေး ကြည့်ရတာ…….လုပ်ရှားလို့ရလောက်တယ်………..ကုန်းခုန်းပြီး နောက်ကနေသာ ဆောင့်လိုက်ရရင်……..
အရသာရှိလှမယ့် ဖြစ်ချင်းဆိုပြီးတွေးမိကား ပြုံးနေသော သူတို့ နှစ်ယောက်……..အပြုံးချင်း ဆုံသွားသည်…….။
်ဝင့်ဝါ အပြင်ထွက်သွားတော့ ………….တုန်နေသည့် တင်ကြီးကို ပြေးဆောင့်လိုက်ချင်သည့် စိတ်ကို ပိုမို ဆိုးဝါးစေမည့် မြင်ကွင်းက ထပ်ဝင်လာသည်…….။
သီတာက………ခုံပေါ်မှာ တင်ပလင်ခွေ ထိုင်နေရင်း အောက်စကလွတ်၍ အဖြူရောင် ပင်တီအောက် အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးက အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသော လီးကို ……………. တဆတ်ဆတ် တုန်လာစေသည်……။
ဝင့်ဝါ စိတ်ထဲ အတော်ကျေနပ်မိသည်………………. သူ့ကို ပထမဆုံးခေါ်တွေ့လို့…….
ဒီဘဲကြီးတော့ ရအောင် ကိုင်ထားရမည်………….သူ့ရာထူးနဲ့လစာ အနေအထားလည်း မဆိုး…. လူမြင်တင့်တယ်သော ဘဲကြီး တစ်ယောက်နဲ့တွဲချင်နေသည့်………စိတ်ထဲက ပီတိက မျက်နှာပေါ်မှာ ပေါ်နေသည့် ဝင့်ဝါကို ငေးနေသော
ဝင့်ဝါကို သိပ်မကျေနပ်…….ဒီကောင်မ အကြောတော်တော်ထောင်တယ်……….ဒီဘဲကြီးကို ငါလည်း ချွေလိုက်အုံးမယ်.။
ဖင်ကြားညှပ်နေသော……….. ပင်တီကို ဆွဲဆန့်လိုက်သည်…….။
တိုနေသော စကဒ်ကို အပေါ့်နည်နည်း ဆွဲတင်ပြီး…… နို့လေးကို နည်းနည်း . ပင့်တင်လိုက်သည်…။
သီတာ နို့ နှင့်…….. တင်က လည်း အမိုက်စား..
မြင်သမျှ ယောက်ျားလေးတိုင်း လီးတောင်နိုင်သည့် အနေအထား………။
အခန်းထဲဝင်လာသော………သီတာကို ညဏ်လင်းထက် ပြုံး၍ နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း…………။ ထိုင်ပါ မသီတာ……….. လက်ရှိ အလုပ်ပေါ် ခံစားနေရတဲ့ အမြင်လေးရယ်……….. အခက်အခဲလေးတွေ သိချင်လို့ပါ.
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လို ရင်ဖွင့်စေချင်တယ်……….ဒါမှ ဘယ်လို အကောင်းဆုံး လုပ်မလည်း ဆိုတာ ကျနော် စဉ်းစားနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါ………။
အပြောအဆို ညက်သော………….ကိုဉာဏ်ဒုတ်ကိုတောင် ပြေးစုပ်လိုက်ချင်သည်…………။ ဒီမှာက မန်နေဂျာကို မကြည်ကြတာ အစ်ကိုရဲ့………သူက ပါဝါ အရမ်းပြတော့ ညီမတို့လည်း သိပ်မလုပ်ချင်ဘူး အဲဒါကြောင့် ရောင်းအားကျတာ….
ပြီးတော့ သူက နေရာတကာ ကောင်းတာဆိုရင် သူဘဲ အခွင့်အရေးယူပြီး……ညီမတို့ကို အရမ်းနင်းတာ…..။
အေးအေးလေးနှင့် သီတာကို ………….ကြည့်ရင်း သရေယိုချင်လာသည်….
နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်ချင်နေသည်…………… ခုဏက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကို မြင်ယောင်ပြီး အောက်က လီးက တောင်လာသည်.။
ဒါနဲ့ ညီမက ဘယ်မှာနေတာလည်း……..
ညီမက လှိုင်……..ဘာဒါမှာ ………
ဒါဆို အစ်ကိုနဲ့ သိပ်မဝေးဘူးထင်တယ်……….အစ်ကိုက ပါရမီမှာ
ဒီလို လုပ်ပါလား………… အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် အစ်ကိုကားနဲ့ လိုက်ခဲ့လေ………….
သီတာ စိတ်ထဲမှာတော့ ………ထီပေါက်သလိုပင်…………..
ကံတရားက သူ့ဘက် ပါလာသည်……..။ အပြင်ရောက်မှ ကြွားရအုံးမည်……..။ ခက်တာက သူနဲ့ ဝင့်ဝါက သိပ်မဝေး
ဝင့်ဝါကိုလည်း ခေါ်မည်ဆိုလျှင် ငါးမှတ်တိုင်လောက်ဘဲ………. ကားတူတူ စီးရမည့် အခွင့်အရေး…….
ခါးကော့ရင်မော့ပြီး ပြုံးဖြီးဖြီးထွက်လာသော သီတာကို ကြည့်၍ ……. ဝင့်ဝါ စိတ်ထဲ သိပ်မသင်္ကာ. သီတာက ရိုးပုံရပေမယ့် ပစ္စည်းရှိ လူတန်းစား………… ယောက်ျားလေး တော်တော်များများက သီတာဆို………အတော်လေး စိတ်ဝင်စားကြသည်…။
ညည်းတို့ဟာကလည်း မြန်လိုက်တာ……………ငါက ကြာမှ ကြိုက်တာဟ……..
မအိဖောက်၍ အကုန်လုံး ပြုံးကုန်ကြသည်…….။
ပြုံးပြုံးနှင့် ဝင်လာသော မအိဘော်ဒီကိုကြည့်၍လည်း………..ညဏ်လင်းထက်.သားရေ ကျရပြန်သည် ဖြစ်နိုင်လျင်…….. အကုန်လုံးတန်းစီ၍ သာ လိုးလိုက်ချင်သည်…….။
မမကတော့ ဒီမှ စီနီယာ အကျဆုံးဘဲ………………..
အလုပ် ကိစ္စ အခြေအနေလေးရယ်……စိတ်ထဲက ဖြစ်နေတဲ့ ခံစားချက်ရယ်……
အလုပ်ကိစ္စကတော့ မင်းရောက်လာပြီ ဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ……။
အားလုံးက မင်းကို သဘောကျနေကြတဲ့ ပုံဆိုတော့ ပြန်အလုပ်ကြိုးစားကြမှာပါ……..။
ရောင်းအားလည်း မကြာခင် တက်လာမှာပါ………………….. အစ်မတို့ကတော့………. ရယ်ဒီဘဲ ပစ္စည်း အသစ် နှစ်မျိုးလောက်တော့ စမ်းယူစေချင်တယ်………………ဒါမှ အစ်မတို့ income ပိုတက်လာမှာလေ. ရအောင် အစ်မတို့ ဖောက်မယ်…………..။ အားနှင့်မာန်နှင့် ပြောနေသော မအိကို တကယ် သဘောကျမိသည်…။
ဒါနဲ့ မအိ လက်ရှိ ရာထူးမှာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလည်း…………….။
သုံးနှစ်ရှိပြီ………..ရာထူးလည်း မတိုး…………လစာကတော့ နည်းနည်း တိုးပါတယ်….။
ဒီလို ခပ်ထက်ထက် အရောင်းသမားများက နုံအသော မန်နေဂျာများက သူတို့ထက် သာသွားမှာကြောက်၍ ရာထူး မတိုးပေးတာကို
ကြိုသိထား၍ လှမ်းအစ်တုန်း……ခံစားချက် မျက်နှာနှင့် ပြန်ဖြေသောသ မအိကို သနားသွာားသည်……..။ ဟုတ် မအိ…………….. ကျနော် ဂတိပေးတယ်…
နောက်သုံးလနေရင် မအိ promotion ရစေရမယ်…………ဟု ဆိုကာ လက်ကမ်းပေးသော ကိုဉာဏ်လက်ကို ချိတ်လုပ်ရင်း…….
သူ့ဘက်က ပွင့်လင်းမှ ကိုယ် အရင်ဆုံးစားရမည့် ကိစ္စ……အတွေ့အကြုံများက သင်ပေးထား၍………. လက်ဦးအောင် အရင်ဆော်လိုက်သည်……..။
ကိုဉာဏ်လက်လေးတွေက သွယ်သွယ်ရှည်ရှည်လေး…………..ကိုယ့်လက်ထက်ပင် နူးညံ့သေးသည်ဟု မအိ ခံစားရသည်..။
သူ့လက်ကို နမ်းလိုက်သော မအိကို ………..အံ့သြသည့် အကြည့်ဖြင့် ကိုဉာဏ်ကြည့်ရင်း………. ပါးစပ်ကလည်း………. အလိုက်သင့်လေးပင်…….
love you too………..ma ei…..
ဆိုသည့် စကားသံလေး ထွက်ပေါ်လာ၍ မအိလည် ကျေနပ်သွားသည်…….။
သူတို့သုံးယောက်ကို မေးကြည့်ရုံမျှ ဖြင့် အခြေအနေကို ကောက်ချက်ချ၍ ရနိုင်သည့် အနေအထား…….
ပထမဆုံး…………. ကုမ္ပဏီ အီးမေးကို ဖွင့်၍ welcome လုပ်ထားသော HR ကို မေးပြန်ကာ. စတင် တာဝန်းထမ်းဆောင်ကြောင်း သတင်းးပို့လိုက်သည်………။
ကဲ…… အားလုံး……… ကျနော် အလုပ်စဝင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့………..
ဒီည အားလုံးကို ရွှေဘဲမှာ ဒင်နာလိုက်ကျွေးမယ်……………. ဆိုသည့် ကိုဉာဏ် အသံ အဆုံး…….အားလုံးက လက်ခုပ်တီးကြသည်.။
အခန်းထဲ ပြန်ဝင်ထိုင်ကာ………….အရင် ၆ လက အရောင်း taget and achieved ကို စစ်ကြည့်ပြီး………ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က ရောင်းအားနှင့် ယှဉ်ကာ ထိုးကြည့်ရင်း…..အဖြေရှာတွေ့သွားသည့် ကိုဉာဏ် သဘောကျကာ ပြုံးရင်း
BOD အဖွဲ့ထံ အီးမေး ပို့လိုက်သည်……….။
ပျော်မြူးသော သူတို့ အဖွဲ့ တူတူ ထွက်သွားသည်ကို ကြည့်၍…………….အခြားအခန်းများက ငေးနေကြသည်….။
ဌာနက စူပါ ကာစတန်ပေါ်တွင် လူစုံသော အခါ……………
not limited budget………နော်.
ပြီးရင် ကာရာအိုကေ ဆက်ဆိုလို့ရတယ်………..။
ဟေး…………..ဆိုသော ပျော်မြူးနေသော……. သူတို့ကို ကြည့်၍……ကိုဉာဏ်လည်း ပိုပျော်လာသည်……..။ သူတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖို့ သိပ်မခက်………..Motivation မလုပ်ပေး၍သာ …………. ရောင်းအား ကျနေကြောင်း ပိုသဘော ပေါက်လာမိသည်……။
ရွေဘဲရောက်တော့ တစ်ယောက်တပေါက်နှင့် မှာနေကြသော သူတို့ အသံလေးတွေမှာ မြူးနေကာ မျက်နှာလေးတွေက
ပြု့းနေကြတာ မြင်ရ၍ …….ကျွေးရကျိုး နပ်သည်ဟု.တွေးမိသည်…။
ကျနော်တော့ နည်းနည်း သောက်မယ်နော်……………အပြင်းကြိုက်လား……..အပျော့ကြိုက်လား… ဆိုတော့လည်း……အားလုံးက တစ်ယောက် တပေါက်…….
ဒီတော့ waiter ကို………… ဂျော်နီ အမည်း တလုံး………ဝိုင် နှစ်လုံး နှင့် ဘီယာ တစ်လုံးမှာလိုက်သည်…….။
ဝင့်ဝါ နှင့် သီတာက ဝိုင်သောက်သည်…….။
ကိုဉာဏ် ၊ မအိ နှင့် ……. စိုးပိုင်က…….. အပြင်း
သော်တာ နှင့်……. မင်းနိုင် ကတော့ ……. ဘီယာတဲ့
အားလုံး ခွက်ကိုယ်စီကိုင်ကာ. Cheers အော်၍ စသောက်ကြသည်….။
တကယ်တော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းအောင်…….ပိုမို ခင်မင်ရင်းနှီးလာအောင် လုပ်ဆေင်၍ အကောင်းဆုံးနည်းမှ
ညစာ အတူစားချင်း……….. ခရီးအတူတူ ထွက်ခြင်းတို့ ကို သိထားသော ကိုဉာဏ်လက်တွေ အသုံးချနေခြင်းပင်…..။
တခါတရံ လက်အောက် ငယ်သားများနှင့် ဆက်ဆံရသည့် အခါ………နှမြောနေ၍ မရ… ကိုယ်က သူတို့ကို အရင် ဂရုစိုက်ပြမှ…………..သူတို့က ကိုယ့်ကို ပို၍ တန်ဖိုးပြီး လေးစားကြသည်..။
စကားတပြောပြော…. နှင့်……. သောက်လိုက် စားလိုက် နေရင်းက အတော် ကောင်းလာတော့ အလုပ်ကိစ္စ အပြင်……..personel ဖီလင်တွေ ပါလသည်…..။
ဒါတွေကမှ တကယ့် အနှစ်ဖြစ်သည်………….သူတို့ ပြောနေသည့် စကားတွေက ရင်းနှီးလာ၍လား မသိ အတော် ပွင့်လင်းကြသည့် အပြင်..ချက်ချင်းတောင် လီးတောင်လာစေသည့်……
သောက်ပြီး ပြန်ရမှာ ပျင်းစရာကြီးဟာ……………….ကာရာအိုကေ ဆက်ဆိုရအောင်လို့ ပြောတော့ ပြန်ရမှာ ဝေးသည့်………..ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက် နှင့် မအိကတော့………..နောက်တခေါက်မှတဲ့… သော်တာကလည်း………….. အိမ်မှာ အမေ နေမကောင်းလို့…….ဆိုတော့…..
သီတာရယ်…… ဝင့်ဝါရယ် ကိုဉာဏ်ရယ်ဘဲ ကျန်တော့သည်…။
အစ်မက မြောက်ဒဂုံ……….သားလေးက မျှောနေမှာ ငါ့မောင်ရဲ့
အမေကလည်း အသက်ကြီးပြီလေ……………. ဒီတိုင်းဆို လိုက်ချင်ပါတယ်ကွယ်…..။
ကဲဒါဆို ဒီလို လုပ်ဗျာ…………။
waiter ကို လှမ်းခေါ်၍ အိမ်ပြန်မည့် သူများ …………..ကို အိမ်ကလူတွေ အတွက် ပါဆယ် မှာခိုင်းလိုက်သည်.။ ဒါကို မအိက လက်မခံချင် အတင်းငြင်းသည်…..။
ယူသွားပါ မအိရယ်………….. ကျနော်က စေတနာနဲ့ ကျွေးတာပါ……။
ဘေးက သော်တာနှင့်ဝင့်ဝါက အတင်း တိုက်တွန်းမှ…… သူ့အမေနှင့် သားအတွက် မှာရှာသည်..။
မုန့်ဖိုး ငါးထောင် ထုတ်ပေး၍………..
ပြန်မည့် လေးယောက် အတွက် taxi ဌားခိုင်းလိုက်သည်……..။
ကဲအားလုံး……….last one……………….cheers ဆိုသည့် ကိုဉာဏ်ကို မအိတို့ တဖွဲ့လုံး သဘောာ ကျနေကြသည်.။
နောက် သုံးလပတ် target ပြည့်ရင် ကြိုက်တဲ့ beach ကို လိုက်ပို့ပေးမယ်……..။ this is my promise.
တခါတရံ အင်္ဂလိပ်လို ညှပ်ညှပ်ပြောပုံက သူ့မျက်နှာကို ပိုခန့်စေသည်…….။ ရုပ်မချောပေမယ့် ကြည့်ကောင်းသည့် သူ့မျက်နှာတွင်
အထူးခြားဆုံး အချက်က ……အရမ်း ရိုးသားသည့် ပုံပင်……..။ သူ့မျက်နှာက အရမ်းအေးချမ်းသည်ဟု စိုက်ကြည့်နေသော
အားလုံးပြန်သွားတော့………… KTV ဆိုချင်သည့် နှစ်ယောက်ကို G6 ကို ခေါ်သွားသည်……..။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အလွတ် သိပ်မပေးကြ၍…………. ဂွင်ဖန်ဖို့က ခက်လှသည်…….
ဝင့်ဝါက သွက်သည် ဆိုပေမယ့်………သော်တာကလည်း ….. လျင်သည်…..။
ည ၁၁ နာရီထိုးမှ..သိမ်း၍ …………… သော်တာကို အရင်ပို့ပေးကာ………..ဝင့်ဝါကို နောက်ဆုံးမှ လိုက်ပို့ပေးရသည်….။
လူရှင်းနေသော အင်းစိန်လမ်းမ……….ကားမောင်လျှင် ငါးမိနစ်ဖြင့်ပင် ရောက်နိုင်သည် ဖြစ်၍………… ဖြေးဖြေးချင်း မောင်းကာ
ဝင့်ဝါ နှင့် စကားလက်ဆုံကျမိသည်……..။
လုံးဝန်းနေသော ရင်..ကားနေသောာ တင်…………..
ဝင့်ဝါ…….ကိုယ်ကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော်………… ကိုယ်တော့ မင်းကို first eye sight မှာဘဲ ချစ်မိသွားပြီကွာ…… ကိုယ် မညာချင်ဘူး…………………. စိတ်ထဲမှာလည်း မသိမ်းထားနိုင်ဘူး…….
ရီဝေဝေ ……………နှင် ကိုဉာဏ် နှုတ်က သွက်သလို လက်ကလည်း သွက်သည်…….။ လက်လေး တဖက် ဖမ်းကိုင်ထားသော
ကိုဉာဏ်ကို……………… ခေါင်းလေးမှီ၍ အဖြေပေးလိုက်ချင်သည်…….
ဈေးကျမှာ ဆိုး၍သာ စဉ်းစားချင်ယော် ဆောင်နေရသည်…………. ။
ဝင့်ဝါ အသံထဲမှာ ငြင်းဆန်သံ မပါ၍…………….. ၉ဝရာခိုင်နှုန်းသေချာသည့် အသံကို ကြားရသည့်အခါ………. လမ်းဘေး ကားခဏ ထိုးရပ်၍…………….
ဝင့်ဝါ ပခုံးလေးကိုင် ဆွဲဖက်ကာ……………. ကလေးကို ကိုယ်က မြင်မြင်းချင်း ချစ်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ရင် ခုဘဲ အဖြေပေးပါ ကလေးရယ်……..။
ရင်ခုန်နေသော…………… စိတ်ထဲမှာ…………သူ့ဖက်ထား၍ ပိုမို နိုးကြားလာသည့် အချစ်စိတ်. သောက်ထားသော…၀ိုင်ကလည်း အစွမ်းပြဆိုတော့………..
ဝင့်ဝါ နှုတ်ဖျားက………………….တူတူပါဘဲ……..လူကြီးရယ်.ဆိုသည့် စကားသံ အဆုံး………
ချစ်စရာ နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကို ကစ်ဆင် ဆွဲပေးလိုက်သည်……….။
နှစ်ယောက်လုံး အသံတွေက….ဖီးတွေအရမ်းဝင်လာ၍ ရှိုက်သံပင် ပါလာသည်……။
အကောင်းဆုံး အနေအထာားကို လက်မလွှတ်လိုသည့် အတွက်…….။
ခဏလေးဟု ဆိုကာ……..ကားကို လူရှင်းသော လမ်းကြားကို မောင်းသွားပြီး…..ရပ်ကာ……..
ဝင့်ဝါကို ပြန်ဖက်ပြီး နမ်းလိုက်သည်……။
လက်သွက်သည့် ဉာဏ်လင်းထက်………တဖက်က ဘရာစီယာလေးအောက်က နှို့လေးကို ပွတ်ပေးနေသလို……. နောက်တဖက်ကလည်း ပင်တီလေးအောက်က အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်………။
ချစ်ကြရအောင် ကလေးရယ် ဟု ဆိုကာ………..
ခုံကို အဆုံးထိ မှီချခိုင်းလိုက်ကာ
ဝင့်ဝါ အဖုတ်လေးကို ဂျာပေးလိုက်သည်…….။
ဒီလူကြီး ဒီလောက် ပြုစုတတ်လိမ့်ဟုပင် မထင်ထား………..
စက်ဖုတ်အတွင်းသားထဲ လျာကြီး ဝင်လာလျှင်………………… တကိုယ်လုံးစိမ့်နေအောင် ကောင်းသလို ခံစားရ၍ သူ့ခေါင်းကို တင်းတင်း စုပ်ထားမိသည်…………..။
ထိန်းထားသည့်ကြားကပင်…………………. ဆတ်ကနဲ တွန့်သွားကာ…………… အရည်တွေ ထွက်ကျကုန်၍….. sorry Ko…….you are so clever ……..
this is my turn……
ဘောင်းဘီဇစ်ဖြုလိုက်တော့…………အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ထိုးဖောက်မတတ်ကိုကို ဒုတ်ကြီးးကို မြင်လိုက်ရ၍…….
မအိ စကားမှန်သည်ဟု တွေးမိပြန်သည်………။
နီရဲ၍ ပြောင်လက်နေသော ဒစ်ကြီး…………………..လုံးပတ်ကတော့ အတော် တုတ်သည်. လက်ကောက်ဝတ်လောက်များ ပင် ရှိမလား ထင်ရသည်………….။ အရှည်ကတော့ဆုပ်ထားသည့် လက်အပေါ်. လေးလက်မလောက် ကျန်နေသေးသည်……….။
ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန် ဟ ကာာ……..ကိုကို ဒုတ်ကို ငုံလိုက်သည်………။
ဒီကို လျာလေးနှင့် ပွတ်၍ ကစားလိုက်…………… စုပ်လိုက်….လက်နှင့် ထုပေးနေသော ဝင့်ဝါ ရဲ့ ကျွမ်းကျင်သော အပြုအစုအောက်မှာ………………………… မထိန်းထားနိုင်တော့
ဖီးအရမ်းထန်နေသော ဝင့်ဝါ အသံ အဆုံးမှာ…..လရည်တွေ ပါးစပ်ထဲမှ လျှံကာ မျက်နှာပေါ်ပါ
တစ်ရူးထုတ်ကို ယူ၍…………မျက်နှာလေးကို တယုတယ သုတ်ပေးနေသော ……..ကိုဉာဏ်ကို ကြည့်၍ အရမ်းကောင်းလား……………..
ကိုတော့ ဒီည ပြန်တောင် မလွှတ်ချင်တော့ဘူး…………………….. တညလုံး တူတူ
ဒါတော့ မရဘူး ကိုကိုရယ်
မနက် ရုံးတက်ဖို့ အဝတ်အစားတွေ မပါလာဘူးလေ…….။
ဝင့်ဝါ ဌားထားသော တိုက်ခန်းရှေ့ ကားရပ်…….အပေါ်ထပ် အခန်းရှေ့ထိ လိုက်ပို့ပေးရင်း……………ခါးလေးကို ဆွဲဖက်ကာ
နှုတ်ဆက် အနမ်းလေး ပေးရင်း ပြန်ဆင်းလာလိုက်သည်…………။
ဒီလောက် မြန်ဆန်စွာ အဆင်ပြေလိမ့်ဟု မထင်ထား၍……. ပို၍ အားရ ကျေနပ်မိရင်း………….ပျော်မြူးစွာ ဆင်းလာလိုက်သည် .။
အိမ်ပြန်လာရာ လမ်းတလျောက်………………..မနက်ဖြန် အလုပ်ကြောင်း စဉ်းစားရင်း……ကျန်တဲ့ လူတွေကိုပါ…….
အပိုင်သိမ်းဖို့………… နည်းလမ်း စဉ်းစား……..မိသည်……။
အိပ်ယာပေါ် ရောက်သည် အထိ……….ဝင့်ဝါ ရင်ခုန်နေတုန်း…….
ကိုကို အပြုအစုက ကောင်းလွန်းလှသည်………….. အဲဒီ ဒုတ်ကြီးသာ အဖုတ်လေးထဲ ထည့်ပြီး မွှေ့ခံလိုက်ရရင်……..
စဉ်းစားရင်ပင်………အောက်က အဖုတ်လေးက စိုလာပြန်သည်…………
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စရာ မလိုတော့…………မနက်ဖြန် လူရှင်းရင် ကိုကို အခန်းထဲ ဝင်ပြီး တချီလောက် ခံလိုက်မည်ဟု စိတ်ကူးယှဉ်နေရင်း.
ဘယ်လိုပင် အိပ်ပျော်သွားမှန်း မသိ…..။
မနက် အိပ်ယာက ထတော့ ထုံးစံ အတိုင်း…….အလုပ်ထဲ သွားမလို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း….. ဖုန်းထဲ sms ဝင်လာသည်……။
morning baby……….im nearly to arrive.
are you ready……will be arrive on next 15 min
Oh…….. how lovely you are..
im waiting you at down stair……
ကိုကိုစီ စာပြန်ရင်း….. ဆက်ဆီ ဖြစ်မည့် အဝတ်အစားလေးများ အမြန်ဝတ်၍ …………အောက်က ဆင်းစောင့်နေလိုက်သည်…။
မနာလို စရာ……. သီတာက ကိုကိုဘေးက ရှေ့ခုံမှာ ထိုင်နေ၍ နောက်ထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်.။ ဒီကောင်မလည်း……….အတော်လေးကို သွက်နေသည်……..ညက ကိုကိုနဲ့ ငါ့အကြောင်း မသိသေး၍ .. ကိုကို ကို အတင်းလိုက်လျောနေသည်ဟု တွေးရင် ကျေနပ်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်သည်…။
ဝင့်ဝါ…………. မနက်စာ စားပြီးပြီးလား……….
ဒါဆို……. oriental house ကို မောင်းလိုက်မယ်………
မြန်မြန်စားလိုက်ကြတာပေါ့…..အစ်ကိုလည်း ဘာမှ မစားရသေးဘူး…….။
ဆိုင်ရောက်တော့ Dimsum မှာစားရင်း…….. သူတို့ နှစ်ယောက်ကို လှမ်းရှိုလိုက်သည် နှစ်ယောက်လုံး မော်ဒယ်တွေထက် သာသည်………။
တသီးစား……..ကောင်မလေးတွေဆိုတာ …………..အများသုံး မော်ဒယ်တွေထက်သာတာတော့ သေချာသည် ဒါတောင် မော်ဒယ်တွေကိုဈေးကြီးပေးဝယ်စာားသော လူမိုက်များကို အံ့သြမိသည်………။
အနုပညာကို လုပ်ကိုင်နေကြသော……..နံမည်ကြီး တော်တော်များများ……မှာ စပွန်ဆာ ယူထားသည့် လူများ အပြင်
ကြိုက်ဈေးရလျင်…………..ခေါ်ယူ၍ ရသည်. ။
အနည်းဆုံး ၁၀ သိန်းမှ အမြင့်ဆုံး သိန်း ၅၀ ထိ ရှိသည်……………။
တော်တော်များများကတော့4star ဟိုတ်ယလောက်မှ လိုက်သည်……………..ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံခြားကို ခေါ်သွားလို့ရသည်…..။
တခါက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အပို့ကောင်း၍…….မော်ဒယ်တစ်ယောက်ကို စားဘူးသည်.။ အပြင်ရုပ်ရည်နှင့် ဘာမှ မဆိုင်………….. ဘယ်လောက် လုပ်ထားသည် မသိ…
အပြင်နှုတ်ခမ်းသားတွေ လန်နေပြီး……….အပေါက်ကလည်း……………… လက်သွင်း၍ ရလောက်သည်.။ ဒီလောက် ဆေးတွေ ပေါနေတာတောင်……….ပြန်လည် မပြုပြင်………..
တင်သားကလည်း အကိုင်များ၍ မာတင်းနေသည်……………….ဘယ်လိုမှ ဖီးမလာ………ဒီကြားထဲ
နောက်ဆို မော်ဒယ်တွေ ဘယ်တော့မှ ဝယ်မစားတော့…….။
ဘေးက သီတာက လှမ်းမေးမှ တွေးလက်စ အတွေးကို ရပ်၍ …. အမြန်စားလိုက်သည်.။ အခန်းဝ ရောက်တော့………….မအိ ရဲ့ အသံကြီးက ဆီးကြိုနေသည်……။
ဟေ့ကောင်မတွေ ကောင်းစားနေတာပေါ့….ဖယ်ရီ အကောင်းစားကြီးနဲ့…
မနက်စာ ဘယ်မှာ စားလာကြသေးလည်း……………..ငါ့ဖို့ကော ပါဆယ်ပါလား…..
မအိက တကယ်နပ်သည်………….လူရိပ်လူကဲ ခေတ်သည့်နေရာတွေင်………အတော်လေးတော်သည်.။ နှစ်ယောက်သား လျှာလေး တစ်လစ် ဖြစ်သွားသည်………..။
ဆောရီးပါ မမရယ်…… နောက်တခါ ဝယ်လာခဲ့မယ်နော်…….အခုတော့ ဖြစ်သလို…………oriental house မှာဘဲ စားခဲ့ပါတယ်.
မအိလက်မောင်းကို လှမ်းဆိတ်ပြီး …ဝင့်ဝါက ခက်သွက်သွက်လေး.. လှမ်းစလိုက်သည်…။
အခန်းထဲ ရောက်တော့……………. လုပ်စရာ ရှိတာတွေ တန်းစီပြီး လုပ်နေရင်း……
ဘယ်လို အချိန်ကုန်သွားမှန်း မသိ.တံခါးဖွင့်သံမှ ကြားမှ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့……..ဝင့်ဝါ…. အစ်ကို ထမင်းစားရအောင်လေ…………….
၁၂ နာရီတောင် ကျေ်နေပြီ…..
နာရီတောင် မကြည့်မိဘူး………….မြန်မာဆိုင် ကောင်းကောင်းလေးဘဲ သွားစားလိုက်ရရအောင်…..
ထမင်းစားတော့လည်း……မအိနှင့် သီတာ လိုက်လာ၍ ကောင်းကောင်း စကားမပြောရ…….။ သီတာကလည်း အတင်းကြီး လိုက်ကပ်လွန်းလှသည်……………ထမင်းစားတော့လည်း ကိုကို့ကို အရိုးနွင်ပေးတာ အမြင်ကပ်ဖို့ ကောင်းလှသည်……….။
ဟိုလူကြီး မျက်နှာကလည်း ပြုံးဖြီးနေတာဘဲ…………..။
၂ နာရီတော့ မီတင် ထိုင်လိုက်ရအောင်….မအိရေ…….
လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ပေးထား ပါအုံး…….
အစည်းအဝေခန်းထဲမှာ လူစုံတော့…… ကဲ….အားလုံး မင်္ဂလာပါ…။
ဒီနေ့ကတော့…….ကျနော်တို့ အားလုံး ……လာမည့် သုံးလပတ် အတွက်…….ဘယ်လို လုပ်ကြမလည်း ဆိုတာ အဓိက ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့………။
အားလုံး တက်ညီလက်ညီ ဆွေးနွေးကြ၍ ……..တကယ် အားရမိသည်..။
လိုအပ်တာတွေ…ပံ့ပို့ပေးလျှင်…..သေချာပေါက်………….. အောင်မြင်နိုင်သည့် အဖွဲ့လေး ဖြစ်သည်.။ ကဲဒါဆို…………… ကျနော် အနှစ်ချုပ်ပေးမယ်.။
မအိ နဲ့ သော်တာနဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က…………… ပစ္စည်း အသစ်ဖြန့်ဖို့ အတွက်……. customer အသစ်ရှာမယ်.။
ဝင့်ဝါနဲ့ သီတာက ကျန်တဲ့ တစ်ယောက်က …………. လက်ရှိ customer ကို maintain လုပ်ဖို့ အဓိက ထားမယ်.။
ဒီကြားထဲမှာ……………အားလုံးက…………… customer အသစ်တွေနဲ့ တွေ့နိုင်ဖို့ …. ကျနော့် အတွက် appointment လုပ်ပေးပါ……လိုအပ်ရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင် အပြင်ထွက်ပြီး .marketing ဆင်းပေးပါ့မယ်.။
မန္တာလေး….တောင်ကြီးကို နယ် market အသစ် အဖြစ် target ထားပြီး…………..လုပ်ရှာားမယ်.။
မအိက နယ်မသွားနိုင်တော့………….. အဲဒီအချိန် ဝင့်ဝါ ဖြစ်ဖြစ်.သီတာ ဖြစ်ဖြစ်…… အဖော်လိုက်ပေးပေါ့. အရေးကြီးရင်…..ကျေန်ာလည်း လိုက်ခဲ့ပါမ.ယ်…..။
လောလောဆယ်တော့………တစ်ယာက်ကို တနေရာဆီ ခွဲပြီး သွားမယ်…။
ကားမလောက်ရင် taxi သုံးပါ…စိတ်ချရအောင်………. ရင်းနှီးပြီးသား taxi ကို နေ့ပြတ်သုံးပါ.။ လိုအပ်ရင် ကျနော့် အိတ်ထဲက စိုက်ပါ့မယ်………….. ရုံးက ပေးတဲ့ budget ကတော့ အရမ်းနည်းနေတယ် first quarter ပြီးမှ…………. target ပြည့်ရင် လိုအပ်တာ ထပ်တိုးတောင်းပေးမယ်…….။
တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ skill ကို ကြည့်ချင်လို့……….ကျနော် တစ်ယောက်ကို တနေ့စီ အတူတူ လိုက်ကြည့်ချင်တယ်.။
ဒါမှ ခင်ဗျာတို့ ဘယ်လို အလုပ် လုပ်ရတယ်ဆိုတာ သေချာ သိချင်လို့ပါ….။
ဒါဆို ဆရာ…….ကျမတို့ ဒီနေ့ စပြီး လုပ်ရှားလိုက်ပါ့မယ်.။
မအိတို့ အဖွဲ့ထွက်သွားပြီး သိပ်မကြာ…….
သီတာကလည်း…….. သူ့ customer က လာခဲ့ပါဆို၍ ……..ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့် တူတူ ထွက်သွားတော့.
သူ နှင့် ဝင့်ဝါသာ ကျန်ခဲ့သည်…..။
ကိုကိုလည်း မင်းကို ဂရုစိုက်ချင်ပါတယ်ကွာ….လူရှေ့ဆိုတော့ ဆင်ခြင်နေရလို့ပါ…….။ လာ ကိုကို အခန်းထဲလိုက်ခဲ့…………
ဒီလို လာချော့တောလည်း…….မနေနိုင်……………..ကိုကို အခန်းထဲ ဝင့်ဝါ လိုက်ဝင်သွားမိသည်.။ တံခါးပိတ်ပြီးသည်နှင့်…………
ကိုကိုဆီက အနမ်းတွေက မုန်တိုင်း ဆင်လာသည်…….အားကျမခံ ပြန်နမ်းပေးလိုက်ရင်းက………. နှစ်ယောက်သား……..မထိန်းထားနိုင်တော့……….။
ကိုကို လက်က…………. အောက်က ညီမလေးကို လာစမ်း၍ ပွတ်ပေးနေသည်မှာ………….အရမ်း အားမလို အားမရ ဖြစ်စေသည်.
ိုထိုင်ခုံပေါ်ကိုာ သူ့ကို ပွေ့ချီ၍…………. ကိုကိုက အောက်ကို ထိုင်ချပြီ………….ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်သွားသည်….။
အဖုတ် အမြှောင်းလေး အတိုင်း သူ့လျှာာကြီးက ဝင်လာတာ…………….. အသည်းစိမ့်အောင် ကောင်းလွန်းလှသည်.။
အစိလေးကို ကစားနေသည်မှာ……………… လူက မထိန်းထားနိုင်တော့…………. ကိုကို ဖြေးဖြေး………… မီး ပြီးသွားလိမ့်မယ်…………..။
ပြီးလိုက်…………………. ကိုကို အားမရသေးဘူး………ဟု ပြောရင်း
ခြေထောက် နှစ်ချောင်းလုံးကို ပုခုံးပေါ်တင်၍ ……….ကိုကို အားရပါးရ ဂျာပေးမှတော့…………….. စစ်ကနဲ.နေပြီး ကိုကို ဆံပင်လေးကို …. တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဆွဲထားလိုက်သည်…..။
ပြီးတော့ စကဒ်လေး အောက်ဆွဲချ၍ ကိုကို ဘောင်းဘီ ဇစ်ကို ဖြုတ်ကာ……… ဒုတ်ကြီးကို ဆွဲငုံပေးလိုက်သည် ရတယ် ဘေဘီ………..now im ready……….need on 2nd round…
ဒီလောက် အရမ်း လှနေသော…….. စက်ဖုတ်လေးကို လိုးရမည် ဆိုတော့………..ဒစ်ကြီးက ဆတ်ဆတ်ခါအောင် တုန်နေသည်.။
ခေါင်းလေး အသာတွေ့ထားပြီး…………. နှုတ်ခမ်းလေးကို လှမ်းစုပ်ကာ………..
အတွေ့အကြုံရှိတာ မှန်ပေမယ့်………. ပစ္စည်းကြီး နှင့် မတွေ့ရသေးမှန်း……… သိသာသည်.
ခေါင်လေး ဝင်သွားမှ…………… အသာလေး ကစားရင်း.. ဖြေးဖြေးချင်း………. သွင်းလိုက်ရသည်.။ စီးပိုင်နေသော ……အထိအတွေ့က ကောင်းလွန်းလှသည်……။
နည်းနည်း မြန်မြန်ဆောင့်……..ပေးပါဆိုပြီး………..ခါးလေးကောကော့ပေးသော……… သူ့ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်လည်း အရမ်း ကောင်းလာ၍ ခက်သွက်သွက်လေး လိုးပေးလိုက်သည်..။
ငါးမိနစ်တောင် မကြာ……. ဆီးစပ်မှာ အဖြူဖတ်တွေ ဖွေးကပ်နေသည်…………. သူ့မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်၍ ဖီးလ်ခံနေပုံလေးကို ကြည့်ပြီး…………. အားရပါးရ စောင့်ရင်း…….ပြီးလိုက်သည်……။
သုတ်ရည်တွေ……. စောက်ခေါင်းထဲမှာ အပန်းခံရ၍……….. နောက်တချီပင် ဝင့်ဝါ ပြီးသွားသည်… အရင်ဘဲနဲ့တုန်းကတော့ ကွန်ဒုံးဘဲ သုံးတာဆိုတော့………. ဒီလို အရသာက အသစ် အဆန်းဖြစ်သည်.။
အရင်ဘဲတုန်းကထက် အဆများစွာ သာလွန်သော……..ဖီးကို ခံစားလိုက်ရ၍ ကိုကို ကို ပိုကြွေသွားသည်…….။
ပီတီဖြာနေသော ကလေးမျက်နှာလေး ချက်ခြင်း ချေင်ကြသွားသည်……..မိန်းကလေးတွေက သုံးချီလောက် ပြီးလိုက်လျင် ချက်ချင်း မျက်နှာ ချောင်ကြသွားတတ်ကြသည်…….။
ကိုကို ကလေး အတွက် ငှက်သိုက် ထွက်ဝယ်မှ ဖြစ်မယ်နဲ့ တူတယ်…..ကလေး အရမ်း အားကုန်သွားပြီ…..။ ညကျမှ ဆက်ချစ်ရအောင်……..ဟု ပြောရင်း…..သူ့အတွက် ငှက်သိုက်နှင့်……72 hour ဝယ်လာပေးလိုက်သည်…။
ညနေစောင်း………မအိတို့ အဖွဲ့က အရင်ပြန်လာသည်…။
မအိက အရမ်း ပွင့်လင်းလွန်းသည်…………..ဝင့်ဝါ မျက်နှာကို ကြည့်၍……….. အနာနားကပ်ရင်း နင် ဘယ်နှစ်ချီတောင်ပြီးထားတာလည်း………
ဒါဆို ညစာ ငါ့ကို လိုက်ကျွေး
ဒီမှာ ကြည့်. အံတိုနေပြီ……….ညည်းမျက်နှာလည်း မှန်ထဲ ပြန်ကြည့်အုံး……
ဇီးရွက်လောက်ဘဲ ရှိတော့တယ်……………. အခြားလူတွေလည်း ရိပ်မိမှာဘဲ
ဒို့ဆရာကလည်း သွက်လိုက်တာ………..တရက်ဘဲ ရှိသေးတယ်…….
ငါလည်း သွားတောင်းစားအုံးမှဘဲ….ဆိုပြီး ကိုဉာဏ် အခန်းထဲ ဝင်မယ့်ပုံပြတော့…… ဝင့်ဝါက……..
လုပ်ပါအုံး……………. ငါ့ကို နည်းနည်းတော့ ရှယ်အုံးလေဟာ……….. သားရေ ကျစရာလေးတွေ..။
မအိကို ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် ပြောပြာလိုက်တော့……မအိက……..အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့………. ဆရာနဲ့ ဒိတ်မယ် ဆိုတာချည်းဘဲ………..။
ကိုဉာဏ် အပြင်မှ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း သတိထားမိတာက………..
မအိနှင့် ဝင့်ဝါ တိုးတိုလေး စကားပြောနေခြင်း……
သူတို့က ပွင့်လင်းလွန်း၍ နည်းနည်း ရှိန်ရသည်…………………ပြောလို့ရတာ မဟုတ် အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် ပြောရင် ကျန်တဲ့ လူတွေပါ မစားရမှာ စိုးလို့ဖြစ်သည်….။
ဝယ်လာတဲ့ဌက်သိုက်လေး………………မမြင်အောင် ဖွက်ထားပြီး………….. အခန်းထဲ အမြန်သွားရင်း ပစ္စည်းသိမ်း.
ဆရာ ဒီနေ့ ဘာကျွေးအုံးမှာလည်း ဆိုတဲ့ မအိ အသံက ထွက်လာသည်..။
မအိက ဘာစားချင်လို့လည်း………. ဆရာ ဝင့်ဝါကို ကျွေးတာာ စားချင်တာ…..
ဟိဟိ……………..Dim sum ကို ပြောတာပါ..
ကျနော် ဒီနေ့တော့ သွားစရာလေး ရှိသေးလို့
ဒီအပါတ်သောကြာ အကုန်လုံးကို လိုက်ကျွေးမယ်နော်. ။
ကဲ ဝင့်ဝါနဲ့ သီတာ…………လစ်မယ်..
ဝင့်ဝါက မဝင့်မရဲ အသံလေးနဲ့…………ဒီနေ့ညနေ မအိနဲ့ ချိန်းထားတယ်
အိုကေ…………….ကဲဒါဆို သီတာ သွားကြမယ်
ဟုတ်ဆရာ…………………..ဆိုတဲ့ သီတာ အသံလေးက အတော် မြူးကြွနေသည်.။ ဘာရယ်မဟုတ်………….ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်.
ဂွန်ဖန်စရာ မလိုဘဲ………….. အကြောင်း တိုက်ဆိုင်လာလို့..
သီတာ…………ကိုယ် ဘယ်ကို ပို့ပေးရမလည်း……..
အစ်ကို ဒင်နာ တခု သွားစရာ ရှိလို့ လိုက်ခဲ့မလား…………တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ ပျင်းစရာကြီး ဖြစ်နေလို့ လိုက်ခဲ့မယ်လေ…………..။
အိမ်ပြန် အဝတ်အစား သွားလဲလိုက်အုံးမယ်………..။
ဒီတိုင်းလည်း လှပါတယ် သီတာရဲ့………ကိုယ်လည် မလဲတော့ဘူးလေ
ဟုတ်ဘူး………သီတာက ဂါဝန်လေး ဝတ်ချင်လို့……
ကဲ ဒါဆို……. ဆိုင်မှာ အသစ်ဝယ်လိုက်………အစ်ကို လက်ဆောင်ပေးမယ်…………။
ရေမိုးချိုး အလှပြင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့…………. နီးစပ်ရာ ဟိုတယ် တခုခု ဝင်လိုက်တာပေါ့. ရပါတယ် ဆိုင်မှာဘဲ လဲလိုက်လည်း ရတာဘဲ…….။
ဘေးနားက သီတာကို ကြည့်ပြီး ဖီးတက်နေသည့် ကိုဉာဏ်………ဂွင်ဖန်ဖိုက စဉ်းစားနေသည်. သီတာ ပေါင်တံလေးတွေက ဖွေးပြီး ညက်နေသည်…….. .။ အမွှေးရေးတေးတေးနှင့် အသဲလည်း ယားဖို့ကောင်းသည်။
လည်ဟိုက်ကြားက ရင်နှမွှာကိုလည်း အပေါ်စီးက ကြည့်ရင်း….. ရင်ခုန်လာသည်..။
ရန်ကင်းစင်တာ ရောက်တော့……….ဝင့်ဝါကို MK ကဲ ခေါ်သွားပြီး……ကိုယ်တိုင် လိုက်ရွေးပေးလိုက်သည်။ ဂါဝန် အတိုလေးနဲ့ဆို အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းမှာ သိလို့ ………….. အဖြူရောင် ဂါဝန် အတိုလေး ရွေးပေးပြီး အစမ်း ဝတ်ခိုင်းကြည့်လိုက်တယ်..။
အဝတ်လဲခန်းရှေ့က စောင့်ရင်း………အစ်ကို ကြည့်ပါအုံး ……..လှလားဆိုတောာ့………….. သေချာကြည့်တော့………..ဂါဝန်က လှပေမယ့်…အတွင်းခံကြီး ရုပ်ဖျက်နေသည်……။ သူ့ခါးဆိုဒ်လေး မေးပြီး…………။
အစ်ကို ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုပြီး မိန်းကလေး အတွင်းခံ ရောင်းသည့် ဆိုင်ဘက် သွားရင်.
ကိုယ်ဝတ်စေချင်တာလေး ……….ဝယ်ပြီး သူ့ကို သွားပေးရင်း
မထင်ထား……….ခဏနေတော့ တံခါးလေး အသာဟပြီး
ပါးလွှာသည့် အတွင်းခံအော်ကက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး……….ဆီးစပ်နားက အမွှေးလေးတွေပင် မြင်ရသည်. ဘရာစီယာကလည်း……သူ့ရင်ကို အပြည့်လုံအောင်မဖုံးနိုင်၍…………… မို့တက်နေသည်.။
ဆရာမျက်လုံးကို ကြည့်ရင်း………သီတာ သဘောကျနေသည်.
ဆရာသူ့ကို လုပ်ချင်နေတဲ့ ပုံဟု စဉ်းစားမိကာ…………ဆရာ့ ဒုတ်နေရာကို မှန်းကြီးတော့ ဖောင်းကားနေသည်……….. ။ စတိုင်ဘောင်းဘီ ပါးအောက်က ဆရာဒုတ်နေရာကြီးက သိသိသာသာကြီး ဖြစ်နေ၍ ပြုံးမိသည်။
အရောင်းစာရေးမကို ခေါ်၍ …….
ညီမ ဒါက တခါတည်း ဝတ်သွားမှာ……..
ဒီမှာ tag လေးတွေဆြို့ပီးပေးကာ………..ငွေရှင်းဖို့ ကောင်တာ ရောက်မှ
ဆရာက သူ့အတွက် ဝယ်ပေးတာ မှန်း သိလိုက်ရ၍ ပိုချစ်မိသွားသည်……။
သီတာ ခေါင်းလေးကို ပွတ်ကာ…………… ခိုးပြီး ဖီးခံရင်း
ညီမကြိုက်လား……ဆိုပြီး အရှက်ပြေ ပြန်မေးသည်…….။
ဒင်နာဆို၍ ရိုးရိုး ဒင်နာလောက်သာ ထင်ထားသည့် ……သီတာ…………..
နံမည်ကြီး ကုမ္ပဏီ ဖွင့်ပွဲဖြစ်၍…………… လာသည့် ဧည့်သည်များက ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေချည်း ဖြစ်သည်.။ အစ်ကိုက VIP လူဖြစ်နေ၍ ထိုင်ရသည့် စားပွဲမှာ ရှေ့ဆုံးတန်း………။
ရင်တော့ခုန်သည်………သည်လို ပွဲမျိုး မတက်ဘူး၍ ……စိတ်ထဲမှာလည်း ရှိုးတို့ရှုန်းတန်းတော့ဖြစ်မိသည်.။
လူတော်တော်များများက …….. သီတာ ကို ငေးနေတသာ သတိထားမိတော့နည်းနည်း……တောာ့ ကျေနပ်သွားသည်.။
သီတာက ချစ်စရာ ကောင်းပြီးသားဘဲ
ဟု ဆိုကာ ပါးလေး လိမ်ဆွဲလိုက်သည်…..။
အစ်ကို လက်နည်းနည်း ရဲနေသလို ခံစားရသည်.။
အစ်ကိုက ဝိုင်တခွက်ပိုယူလာ၍ ………….နည်းနည်း သောက်ကြည့်လိုက်သည် မဆိုး. မြန်မြန် သောက်ပြီး နောက်တခွက် ထပ်ယူခိုင်းရင်လည်း မကောင်းတော့ ကုန်တာကြီး လက်ထဲ ကိုင်ထားရင်း အခြားလူတွေကို လိုက်ကြည့်လိုက်သည်….။
အစ်ကိုက သူနဲ့ သိတဲ့ လူတွေ လိုက်စကားပြောရင်း.သီတာကိုပါ မိတ်ဆက်ပေးသည်.
ရုံးခန်း ဖွင့်ပွဲဖြစ်၍ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကျေးဇဇူးတင် စကားထပြောနေကြတာနဲ့ အတော်ကြာသည်။ အရေးထဲ အစိုးရတာဝန်ရှိ ညွှန်မှူး တစ်ယောက်က FDI company တွေရဲ့ investment တွေ အကြောင်းကို စာရွက်ကြီး ကြည့်ရင်း
အသံထွက် ခပ်ဆိုးဆိုးနှင့် ဖတ်တာ နားထောင်လိုက်ရသေးသည်။
အတော်ဆိုးတာက……………. 50% တက်သည့် ပရိတ်သတ် က europe and USA က ဖြစ်၍ ဒီလူ အဂ်လိပ်စကားပြေတာ အရမ်းဆိုးမှန်း သိသာလွန်းလှ၍ အစ်ကိုကို ခါးကို လမ်းတို့လိုက်သည်.
အစ်ကိုက လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ မျက်စိမှတ်ပြသည်…ငြိမ်ငြိမ်နေဆိုသည့် သဘော…………
ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် စာရွက်ကြီး ကိုင် ဖတ်ပြပြီးမှ ဆင်းလာသည်……..ဘူမသိ ကိုးမသိ လက်ခုပ်လိုက်တီးပေးရသေးသည်..။
အားလုံးပြီးသွားတော့ ဘူးဖေး ညစာ ဖြစ်ရင် တန်းစီပြီး ယူရသည်…။
လူကြီးလူကောင်း ပီသမှု ဆိုတာ အဲဒီမှ တွေ့လိုက်ရသည်……….အားလုံး စနစ်တကျနှင့်……….. တန်းစီယူပြီး ကိုယ့်စားပွဲ ကိုယ ထိုင်စားကြသည်.။
ကလေး ပြောချင်တာ…………..ဟိုလူကြီး . အဂ်လိပ်စာ ညံ့တဲ့ အကြောင်း မဟုတ်လား……တဲ အွမ်………တော်လိုက်တာ…………….ဘယ်လို လုပ်သိလည်း ဆိုတော့
အစ်ကိုက ဒီလူကြီးနဲ့ ဆုံတာ သုံးခါလောက် ရှိပြီ…………….အမြဲတမ်း အတူ ထိုင်နေကြလူတွေ ပြောနေကြစကားလေ ဟု ဆိုကာ
ရီပြောနေသော အစ်ကို ကို ကြည့်ပြီး သဘောကျမိသည်…..။
စားပြီးတော့ ……..အပိတ် ဝိုင်လေး တခွက် ထပ်ကစ်လိုက်၍ ..နည်းနည်း ကောင်းနေသည်.
ကိုကိုတော့ မပြန်ချင်သေးဘူးကွာ………… တနေရာရာ သွားရအောင် ဆိုတော့.. သီတာ မငြင်းနိုင်…..မငြင်းလည်း မငြင်းချင်
ဒီလို ညလေး ကို ကိုကိုနဲ့ ဖြတ်သန်းချင်သည်……………ကိုကိုဆီက အချစ်တွေကို ရယူချင်နေ၍…..
ဆိုတော့………ခေါင်းလေး ပုတ်ပြီး အိုကေဆိုသည့် အသံမှာ တက်ကြွနေသည်…။ ဘားမှာ နှစ်ယောက်သား စကားပြောလိုက် သောက်လိုက်နဲ့…….အတော်ဟုတ်နေသည်…။
အစ်ကိုကလည်း ဒီအချိန်ကြီးမှ ပြန်လို့ မရတော့ဘူးလေ……………….ဖုန်းဆက်ပြေထားပြီးပြီ. သူငယ်ချင်း အိမ်မှာ အိပ်မယ်လို့…..။
အရိပ်ပြလို့မှ အကောင်မထင်ရင်…………ကိုယ့်လောက် ညံ့တဲ့ လူရှိမှ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ တွေးကာ. ဒါဆို အစ်ကိုနဲ့ လိုက်အိပ်လိုက်………………
အစ်ကိုလည်း မူးနေတော့ မမောင်းချင်တော့ဘူး………….နီးစပ်ရာ ဟိုတယ်မှာဘဲ အိပ်လိုက်ရအောင် ဆိုတော့……..
ပန်ဒါ ဟိုတယ် ရောက်သွားသည်………….တည ၇၀၀၀ သောင်းဆိုတာ များတော့ များသည်.။ သီတာ နှမြောမိသည်…………..။ ကိုကိုကတော့ အေးဆေးပင်…
အဝတ်အစားလည်း.ရေချိုးချင်ရင် ချိုး…………….. အစ်ကို အပြင်ထွက်ပေးရမလား ဆိုတော့…. ရပါတယ်……………မထွက်ပါနဲ့…………..
အစ်ကို ခိုးမကြည့်နဲ့နော် ဟိုဘက်လှည့်……………ဆိုပြီး
အဝတ်အစား ချွတ်ချလိုက်တာ………မှန်ထဲက မြင်နေရသည်………
ဘောင်းဘီကုန်းချွတ်နေသော သီတာ ဖင်နှလုံးကြားက အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးက ပြေးယက်ချင်စရာ……….။ ထပြီး ယက်ပေးချင်စိတ်ကို မနည်း သီးခံထားရင်း…………. အောင့်ထားရသည်.
သီတာ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတော့…ကိုဉာဏ် တစ်ယောက်
လက်ဆွဲတော် အိတ်ထဲက ….. ဆေးထုတ် သောက်ထားလိုက်ပြီး……..လိမ်းဆေးလေးပါ ကူပေးလိုက်သည်.။
လိမ်းဆေးက ဈေးသာ ကြီးတာ.အနံ့လည်း ကောင်း…..ပူရှိန်းပူရှိန်းနှင့်………….. ဒုတ့်အပြည့်ကို ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်လိမ်းရင်း
သေချာပေါက် စားရမည့် အသီး အတွက် အခွံနွှာဖို့ပြီးပြီ……………….. ကိုက်စားဖို့သာ လိုတော့သည့် အနေအထား….။
သောက်ဆေးရော လိမ်းဆေးပါဆို……….ပထမ အချီတင် နာရီဝက်လောက် ထိန်းထားနိုင်သည်.။ စတွေ့သည့် အချိန် အပြည့်အဝ မချစ်ပြနိုင်လျှင် သိက္ခာကျသည်ဟု လည်း ခံယူထားသည်…။
မိန်းကလေးတွေက ချစ်တာထက် လိုးတာ ပိုကောင်းသူကို တကယ်မက်သည်.။
ကောင်းကောင်းလိုးပေးနိုင်လျှင် ထိန်းရတာ လွယ်သည်……………..အခြား တစ်ယောက်နောက် လိုက်ပါဆိုတောင် မလိုက်.
ဒါကြောင့် တချို့မိန်းမတွေ……….. ယောက်ျားကို ရှာကျွေးရသည့် အပြင် …ယောကျား နှိပ်စက်တာ ခံနေရလည်း…..မခွဲနိုင် မခွာရက် ဖြစ်နေတာ…….။
သီတာ ရေချိုးတာက အတော်ကြာသည်…………သေချာပေါက် ပြောရဲသည်…….သူ့အဖုတ်လေးကို အနံ့ကင်းအောင်သေချာ ဆေးနေပုံရသည်.။
သီတာ ရေချိုးခန်းက အသံရပ်သွားတော့.ဆေးလူးတာ ရပ်ပြီး…………. ဘီယာလေး ထပ်ထုတ် သောက်ရင်း စောင့်နေလိုက်သည်…။
အထဲရောက်တော့ ရေချိုး……………..ညီလေးကို ရေပြောင်အောင် ဆေးရသည်.
ဒီဆေးက နည်းနည်း ခါးသည်.
တလောက ဆေးလူးထားရင်း စော်တဗွေကို မှုတ်ခိုင်းတာ……….. ခါးတယ်ဆိုပြီး ဆက် မမှုတ်ပေးတော့. ပြီးတောက သူ့နှုတ်ခမ်းတွေပါ ထူလာသည်……….ဟု ပြောသည်..။
ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး………..အပြင်ပြန်ထွက်တော့……..သဘက်လေး ပတ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်..။ ဒါဆို သဘောပေါက်သည်…….။
သီတာ အနားသွားပြီး…..နောက်က သိုင်း၍ ဖက်ရင်း လည်ပင်းလေးတွေ နမ်းပေးလိုက်သည်….။ ချစ်တယ် ……………ကွာ.
မင်းကို မြင်းမြင်းချင်း ရင်ခုန်မိတာ သိလား……။
ကိုယ်ရယ် ………သီတာလည်း တူတူပါဘဲ….
စကားလည်းပြော………လက်တွေ လည်း အလုပ်လုပ်………ပါးစပ်ကိုလည်း အနားမပေး ခုတင်ပေါ် လည်းချလိုက်ရင်း…….သဘက်လေးကို ဖွင့်ချလိုက်သည်……..။
အစို့ကောင်းကောင်း မခံရသေး၍ ခေါင်းလေးက ဝင်နေသည်………….။
ဖီးတက်၍ နို့အုံသားတွေက တင်းမာပြီး အရမ်းကိုင်လို့ကောင်းသည်……..။
လျှာက်လေးနဲ့ ခေါင်းလေးကို ယက်လိုက်…….ချက်လေးကို နမ်းလိုက်နဲ့ ……….. အဖုတ်လေးပေါ် မထိတထိ လာပွတ်ပေးနေမှာတော့
စက်ဖုတ်ကို ယက်ပေးပါတော့လို့ …….စိတ်ထဲက သီတာ တမ်းတမိသည်….။
မရိုးမရွဖြစ်အောင် လုပ်ပေးရင်း အခြေအနေကြည့်တော့………..ခါးကြီးကော့ကော့ပေးနေသည့် ပုံလေးက အသက်ရှူမှားစေသည်.။
ကိုယ်လည်း မထိန်းနိုင်တော့………..ပေါင် နှစ်လုံးကြား ခေါင်းမြှုပ်ထားပြီး………အရသာ အရှိဆုံး အစားအစာလေးကို အားရပါးရ ယက်ပေးလိုက်သည်…။
ကောင်းမကောင်းတော့ မသိ……..စက်ဖုတ်ထဲက အရည်တွေယိုလာမှ စိုရွဲနေတာဘဲ………။
ကိုညဏ်တစ်ယောက် ………သူ့ဒစ်ကို စက်ဖုတ်ကို ဆွဲတေ့ပြီး………..ပွတ်ပေးလိုက်တော့ သီတာ…………အသံထွက်လာသည်………….
နာတယ် အစ်ကို ဖြေးဖြေးနော်တဲ့………
သူ့စကားက သူခံဘူးကြောင်းပြနေသည်….လီးတောင် မဝင်သေး……နာစရာ အကြောင်း မရှိ… ဟန်ပြစကားလုံးတွေနဲ့ သူခံဖူးတာ ဖုံးဖိဖို့ ကြိုစားကာမှ အပျို မစစ်ကြောင်း ထင်ရှားလာသည်……။
စစ်တာ မစစ်တာ ထက်………ဒီအချိန်မှ ဖီးလ် အပြည့်ခံဖို့ အဓိကဆိုတာ တွေးမိပြီး……. ဒစ်ကို ဖြေးဖြးချင် နှဲ့ထည့်သည်…..။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရာသာ………တင်းကျပ်နေသော အဖုတ်သားတွေက ဒစ်ကို ပွတ်ဆွဲသွားတဲ့ အရသာက ကောင်းလွန်းလှသည်
လေးငါးချက်ဘဲ လိုးရသေးသည်……..သီတာ ပြီးသွားပြီ……..
ကောင်းလိုက်တာ ကိုယ်ရယ်…………စက်ဖုတ်ထဲက ချွတ်တောင် မချွတ်ချင်တော့ဘူးလို့ စိတ်ထဲက တွေးရင် ခါးလေးကို အလိုက်သင့်ကော့ပေးလိုက်သည်….။
စားဆေးနှင့် လိမ်းဆေးက အစွမ်းပြတော့ သံချောင်းကြီးလို မာနေသော လီးက နှုးညံ့သော စက်ဖုတ် အတွင်းသားတွေ
အသဲတယားယားနှင့် သေးပေါက်ချင် သလို ဖြစ်လာတော့……….ကို မြန်မြန်ဆောင့်ပါ…..
လာလေးဘက်ထောက် ဆိုပြီး…………… ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ အရည်တွေ က ပြွတ်ကနဲ အောက်ကို စီးကျလာသည်..။
လေးဘက်ထောက်ခိုင်းရင်း…….ဖင်နှလုံးကြားက ပြူးထွက်လာသော စက်ဖုတ်
အရည်တွေ ရွဲနေပုံက မလိုးခင် ထပ်ဆွဲဆောင်မှတော့ …………လျှက်နဲ့ယက်ပေးလိုက်ရသေးည်..။ ၀ါသနာက မတားနိုင်…..လှသည့် စက်ဖုတ်မြင်ရင်……လျှာက သားရေယိုသည်….။
တမျိုးကြီး ဖြစ်နေပြိ ဆိုသည့် သီတာ တောင်းဆိုချက် အဆုံး
ကိုဉာဏ်ဒစ်ကို ထည့်မြှပ်ပြီး…………..နို့အုံကို ဆွဲကာ အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်သည်…
ဆယ်မိနစ်လောက်နေတော့……..သီတာ ထပ်ပြီးသွား၍ မခံနိုင်တော့……………
သီတာကို ချီလိုက်ရင်း ဖက်ခိုင်းထားကာ လိုးပေးလိုက်သည်..။
ဒီလိုးနည်းက အရမ်းထိပေမယ့် ပင်ပန်းသည်………
ခဏလောက် လိုးပေးပြီး………..စားပွဲပေါ် အသာချပြီး………အားရပါးရ လိုးပေးလိုက်သည်..။
အဖုတ်နှင့် ဘောရိုက်သံ က စီးချက် ကျကျ ထွက်လေ……..သီတာ ဖီးတွေ တက်လာသလို. ကိုဉာဏ် လုပ်ရှားမှုလည်း မြန်လာသည်……………။
မထိန်းထားချင်တော့ အပြင်မှာလည်း မပြီးချင်၍…. အဖုတ်ထဲမှာ ပြီးလိုက်ပြီး……..မိန်းနေလိုက်သည်…. ခနနေမှ ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သူ့အရည်……ကိုယ့်အရည် ပေါင်းနေ၍ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပွက်ခနဲ ဖြစ်သွားသည်……။ သီတာ မလုပ်ချင်တော့……………………နားချင်နေသည်..
ကိုဉာဏ်သီတာ မျက်နှာလေး ကြည့်တော့…………. ပင်ပန်းလွန်း၍ မိန်းချင်နေပုံရသည်ဟု တွေးကာ ချီပြီး မွေ့ယာပေါ် ချပေးလိုက်သည်……..။ပါးလေးနှင့် နဖူးလေးကို နမ်းကာ
ခဏမှိန်းလိုက်အုံးနော်……………ကိုကို ရေ အရင်ဆေးလိုက်မယ်…………
ရေဆေးပြီး ထွက်လာတော့ သီတာ တစ်ယောက် ငုတ်တုတ်လေး…………………ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ဖို့ ထလာသည်.
သီတာခါးလေးကို ဖက်ထားပြီး.ရေချိုးခန်းထဲမှာထိုင်ခိုင်းပြီး……..အဖုတ်လေးကို ယုယုယယလေး ဆေးပေးလိုက်သည်..
နည်းနည်း စပ်နေတယ် သိလား….
ဟုတ်သည်…….အတွင်းသားလေးတွေ နားမှာ သွေးစို့နေသည်……….။
လိုးလို့က အားမရသေး…………… အဖုတ်ကလည်း နည်းနည်း ယောင်ချင်နေသည်..
ဒီလိုနဲ့ စကားပြောရင်း ခဏနေတော့ သီတာ အသံတိတ်သွားမှ သေချာ ကြည့်လိုက်တောက အိပ်ပျော်နေသည်ကို တွေ့ရသည်.
အပြစ်ကင်းပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ဖက်ပြီး အိပ်ရတာ အရမ်း အရသာ ရှိသည်. ဖက်ထားရင်းက လီးက တောင်လာပြန်သည်……..
နိုးလည်း မနိုးချင်…………………ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်
သီတာ ပေါင်လေး ဆွဲထောင်ပြီး………… မှုတ်ပေးလိုက်သည်…….
အရည်လေးတွေ လိုက်လာမှ………..ဒစ်လေး အသာလေး မြှုပ်ထားရင် နောက်က ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်ပေးလိုက်သည်..။
လူသာ အိပ်နေသောာလေည်း ဖင်လေး နောက်ပြန်ဆောင့်ပေးနေသော သီတာကို ကြည့်ရင်း အားမရတော့ ပေါင်လေးကို ဆွဲကားရင်း.လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံနှင့် လိုးပေးလိုက်သည်….
ိုလိုးနေရင်းက ကောင်းလွန်းလာတော့……………တင်းမထားဘဲ အမြန်ပြီးလိုက်သည်……။
ရေချိုးခန်းထဲ ပြန်ဝင် ရေဆေးပြီး……………..
ရေခဲ သတ္တာထဲက ရေထုတ်သောက်ပြီး အိပ်ယာပေါ် ပြစ်လှဲလိုက်ရင်း
တောင်စဉ်းစား ၊ မြောက်စဉ်းစားနှင့် အိပ်မပျော်……။
ရုံးတွင်းက လူတွေနှင့် လုပ်ရတာ သိပ်တော့ မကောင်း………. တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် ပြန်ကြည့်နေရသည့် အနေအထား
အခုဆို နှစ်ယောက်တောင် စားပြီးပြီး………………
မအိကလည်း မလွယ်……………… သေချာပေါက် စားရအုံးမည်.။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သာ သိသွားရင် ကိုယ်လည်း မကောင်း…….
သို့ပေမယ့်လည်း……..အစသာ …… နည်းနည်း အကုန်ခံရသည်……….နောက်ပိုင်းဆို လူရှင်းတာနဲ့ ရုံးမှာ ဆွဲလို့ရသည်.
အချိန်လည်း မကုန်………ငွေလည်း မကုန် …အလုပ်လည်း မပျက်ဆိုတော့……….တွေးရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာ မိုးလင်းမှ နိုးသည်……..။
ကိုကို ထတော့…………..၈ နာရီထိုးတော့မယ်………..
ကမန်းကတန်း ထရင်း ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးဝင်ရသည်……။
ဝင့်ဝါကိုလည်း ဝင်ခေါ်ရအုံးမည် ဆိုတော့……အမြန်လုပ်ရသည်…..။
မတတ်နိုင် .မနေ့က အကျီဘဲ ပြန်ဝတ်ပြီး……………လာရသည်.။
သီတာ အလစ် ဝင့်ဝါဆီ sms အတိုလေး ပေးပို့လိုက်သည်.
im abit late baby……
sorry……yesterday night so tired…..
im waiting . ဆိုသည့် စာလေး ပြန်လာသည်.
ဒီအဝတ်အစားတွေနှင့် နှစ်ယောက်စလုံးဆို ရိပ်မိနိုင်သည်……
မနေ့က အဝတ်အစားတွေနဲ့ နှစ်ယောက်စလုံးဆို ရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်
ချစ်လေး အဝတ်ပြန်လဲလိုက်…….ပြီးမှ တက္ကစီနဲ့ လာခဲ့နောက်
အရမ်းချစ်တယ် သိလား ဆိုပြီး……………. အိမ်ပြန်ခိုင်းရသည်…………။
ဘဝ အတွေ့အကြုံအရ ……အချစ်ဆိုတာ အရေးမစိုက်ခဲ့တာ ကြာပြီ
ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မချစ်ခြင်တော့……………….အချိန်တန်ရင် လိင်ဆက်ဆံဖက် ရှာပြီး.လိင်ကိစ္စ ဖြေရှင်းလိုက်ရသည်က ပိုကောင်းသည်။
မိန်းမတွေ ဆိုတာက ကိုယ့် က ဂရုစိုက်လေ………သူတို့က ပို ဂျစ်ကြလေ……….တခါတလေ သူတို့ ရစ်တာာ ခံရတာ ကိစ္စ မရှိပေမယ့်
နေ့တိုင်းဆိုရင်တော့ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသည်……..ဟု ကိုဉာဏ် တွေးမိသည်.
အခုလည်း စော်နှစ်ဗွေနဲ့ မို့ တဖြေးဖြေး အနေရကျပ်လာမှာ သေချာသည်…….။
ဒီနေ့ ရုံးရောက်တော့ အလုပ်ကိစ္စထဲ စိတ်နှစ်ထားလိုက်သည်……..။
Target မပြည့်လျှင် ကိုယ့်တဖွဲ့လုံး အထောင်းခံရမည်…………. ။
လုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်ဖို့က ကိုယ့်က ဦးဆောင်ရမည် ဖြစ်၍ လိင်ကိစ ခဏမေ့ထားပြီး….. အလုပ်ကို အာရုံစိုက်.
လချုပ် စားရင်းတွေ တင်ရင်း……… Tagert performance ကြည့်တော့ သိပ်တော့ မဆိုး. သိပ်တော့ အားမရသေး…….ဒါကလည်း ကိုယ်တိုင်က ဖိဖိစီးစီး မလုပ်ဘဲ…စောက်ဖုတ် ငန်းနေ၍ ဖြစ်သည်..။
အစေးအဝေးလေးတော့ ခေါ်အုံးမှ ဟု စိတ်ကူးရ၍ အပြင်ထွက် ကြည့်တော့ သော်တာ တစ်ယောက်တည်း ရှိသည်.
ဟိုလူတွေ အကုန် အပြင်ထွက်ကုန်ကြပြီလာား……
ဟုတ်တယ် အစ်ကို …..sales call သွားကြတယ်…….။ Order ရတာ နည်းနေသေးလို့တဲ့ တနေ့လုံး အပြင်မှာ ရှိမယ်လို့ ပြောတယ်…..။
ဒါဆို ညီမ ခဏ လာခဲ့အုံး..
အစ်ကို ညီမ စားရင်းလေးတွေ ပြင်ချင်တာ ရှိလို့………… ။
ဟုတ် အစ်ကို …..ဆိုပြီး သော်တာ ထလာသည်..။
သော်တာလည်း သေချာ ကြည့်ရင် မိန်းမချောပင်………..အရမ်း မ ဟော့ပေမယ့်
သူ့ပစ္စည်းနှင့် သူတော့ ………သူလည် အတော်ကြည့်ကောင်းသည် ဟု တွေးရင်းက လီးက တောင်လာပြန်သည်.။ သော်တာ အခန်းထဲရောက်တော့……သူလုပ်ထာားတဲ့ စားရင်းကို ပြရင်း ပြင်ချင်တာလေးတွေ ပြောလိုက်သည်.။
ဒါလေးတွေ တွေ့လား….. Fomula ချိတ်တာ မှားနေတာ…………..
ခဏလေး အစ်ကို…..သမီးပြမယ် ဆိုပြီး ကုန်းလိုက်တော့………မျက်လုံးက သူ့အကျီကြားက နို့အုံကိုသာ ရောက်သွားသည်.
အပြာရောင် ဘရာစီယာလေးအောက်က နို့လေးတွေက စားလို့ကောင်းမယ့် အသီးမှန်း သိသာလွန်းသည်..။
သော်တာ က ဖျက်ခနဲ……လှည့်ကြည့်တော့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ …………..အကျီကို ဆွဲတင်သည်..။ အစ်ကိုကလည်း……………….. ဒီမှာ ပြနေတာကို မကြည့်ဘူး…..ဆိုပြီး စိတ်ကောက်သွားသည့် ပုံစံဖြစ်၍ ပြန်အာရုံစိုက်ရသည်..။
နောက်ကဖက်ပြီး အတင်းစောင့်လိုက်ချင်ပေမယ့် ………….စိတ်ထိန်းထားရသည်….။ ညနေအားလုံး လူစုံတော့………
မီတင် ခဏထိုင်ရင်း အခြေအနေ တင်ပြသည်ကို နားထောင်ရင်း………. အားနည်းနေသော အထက်မြန်မာပြည် အတွက်
Marketing ထွက်မည်ဟု စိတ်ကူးရမိသည်.။
ကဲဒါဆို ကျေန်ာတို့ အထက်မြန်မာပြည်ကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်ဖို့ အတွက်………. ခရီးထွက်ရအောင်ဗျာ……. နှစ်ယောက်လောက် ကျနော်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါလားဆိုတော့…………….
သီတာက …. သူ မအား…………… သော်တာကလည်း မလိုက်နိုင်….
ကောင်လေး နှစ်ယောက်ကလည်း သင်တန်း တက်နေရ၍ မလိုက်ချင်ကြ…
ဒါဆို မအိနဲ့ ဝင့်ဝါကို ခေါ်သွားမယ်……….။
သဘက်ခါ ကား လက်မှတ် ဖြတ်ထားလိုက်…………။ အစ်ကိုတို့ ညနေကားနဲ့ သွားမယ် နေပြည်တော်မှာ တညအိပ်မယ်……………. မန္တာလေးမှာ တည……တောင်ကြီး တည. သော်တာ လိုအပ်တာတွေ စီစဉ်ထားပေးပါ……..ဆိုပြီး သိမ်းလိုက်သည်…….။
မအိနှင့် ဝင့်ဝါ ပါနေမှတော့………….2in one တောင် ဖြစ်သွားနိုင်သည်….။
ကိုယ်လည်း မဆင်ခြင်နိုင်…………ဝင့်ဝါက ပိုဆိုးသည်………..လူရှင်းတာနဲ့ ရုံးထဲ ဝင်လာပြီး အနှိုက်ခံသည် သူ့ပြီးအောင် ဘာဂျာပေးပြီးရင်……….ကိုယ့်ကို အကောင်းဆုံး ပုလွေ ကိုင်သွားသေးသည်….။
အခုဆို သီတာ ပါ ပါလာ၍ အခန်းထဲမှာ သုတ်ရေနံ့တောင် ရနေပြီ……..
တခါတလေ သန်ရှင်းရေး မလာလျှင် မနက်ခင်း ဆို……..သုတ်နံ့နေရသည်…….. အမှိုက်ပုံးကလည်း ကြည့်လိုက်ရင်း
တစ်ရူးများဖြင့် ပြည့်နေသည်က များသည်……………။
မတတ်နိုင်………….အခွင့်ကြုံတုန်း လုပ်ရတာ…………အားဆေးလေးတော့ ဆောင်ထားမှဟု စိတ်ကူးရင်း… အပြန်ကျ ဆေးသွားဝယ်ရသည်…….။
တခါတလေ အရမ်းပေါလာလည်းလည်း စိတ်ပျက်စရာကောင်း….
မရှိပြန်ရင်လည်း တမ်းတပြီး အရမ်း စိတ်ညစ်ရတာက လိကိစ္စဘဲ….
ငှက်သိုက်…….လိမ်းဆေး..လူးဆေး……Chivas ၁၈ နှစ်သား တလုံး.
နယ်မှ မရနိုင်တာာတွေ ကြိုဝယ်ထားလိုက်သည်….။
ကားပေါ်ရောက်တော့………….. မအိနှင့် ဝင့်ဝါက တူတူထိုင်ချင်………..ခက်တာက မိန်းကလေးဆိုပြန်တောာ့………..အဆင်မပြေ
ရန်ကုန်က ထွက်တော့ နှစ်ယောက်သား သီချင်း နားထောင်ရင်း သွားလိုက်သည်…..။
ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းနဲ့လေးနဲ့ ဆံပင်နံ့လေးက စိတ်ကို ကြွစေသည်.
မလုပ်တော့ဘူးလို့ စိတ်ကူးပေမယ့်.. နည်းနည်းမှောင်လာတော့……..သူ့ကို အသာဖက်ထားပြီး. ပါးလေးကို နမ်းလိုက်…….လည်ပင်းကို နမ်းလိုက်ဆိုတော့
ပုဆိုးကို အောက်ဆွဲချပြီး ညီလေးကို ဆွပေးနေသည်….
လူကြားထဲ အလုပ်ခံရတာ တကယ် ဖီးလ်ရှိသည်……….။။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ………ချောင်းကြည့်ချင်လည်း ချောင်းကြည့်နိုင်သည်….
စောင်ခြုံထဲမှာ ဆိုတော့ လုပ်ရှားမှုဘဲ မြင်ရမည်………..ဘာမှ မမြင်ရနိုင်.
သူ့အဖုတ်လေးကို ခွက်ရွရွလေး ပွတ်ပေးလေ…….သူလုပ်ရှားမှုက ပိုမြန်လာလေ
ဘယ်လို အကျိုးပေးလည်း မသိ.ဝင့်ဝါနဲ့ တခါမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဆွဲရ
ပထမဆုံးကလည်း ကားထဲမှာ………ဒုတိယကလည်း ရုံးခန်းထဲမှာ……..
အထာသိနေကြဆိုတော့ ဇိမ်တော့ရှိသည်………..ရုပ်လည်း သိပ်မပျက်……
ခဏနေတော့ မနေနိုင် သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ လက်ထည့်ပြီး ခပ်ပြင်းပြင်း မွှေ့ပေးလိုက်သည်နှင့် သူလည်း အထာပေါက်သည်…………
နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူနီးပါး ပြီးသွားတော့………… ပင်ပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွားသည်..။
စောသေး၍ အခန်းမရသေး………… လူကလည်းရေချိုးချင်နေသည်.။
မတတ်နိုင်….. မနက်စာ အပြင်ထွက်စားပြီး…….တောင်ပေါ် ခဏတက်လိုက်သည်…….. ဆယ့်တစ်လောက်ကျ အခန်းထဲဝင်……ရေမိုးချိုးပြီး…………ခဏနား
မအိတို့အခန်းကို ဖုန်းလှမ်းခေါ်ပြီး ခဏနေ အပြင်ထွက်မယ်လို့ ပြောပြီး………. လှမ်းချိန်းလိုက်သည်……
ကားဌား၍ အဓိက customer များရဲ့ ဆိုင်ကို သွားလေ့လာ………………ပြိုင်ဘက် product တွေရဲ့ အနေအထား…….Promotion တွေကို လိုက်လေ့လာ…..
ဒီလိုနဲ့ ခြောက်နာရီထိုးမှ ဟိုတယ် ပြန်ရောက်သည်…။
မအိက အခန်းထဲမှာဘဲမှာစားချင်သည်………..ဆို၍ စားစရာ မှာပြီး ပုလင်း ဖွင့်လိုက်သည်……..။
စိတ်ထဲက အကြံကတော့ အခြေအနေကောင်းရင်2in 1 ဆွဲချင်သည်……။
ရေချိန်မှန်တော့ ဝင့်ဝါ toliet ဝင်တုန်း ……….မအိက ထပြောသည်……
ဆရာ ………. အိကိုလည်း တခါလောက် လုပ်ပေးစမ်းပါ……. ဒီမှ ငတ်နေတ ကြာပြီ…….
လုပ်မနေပါနဲ့ ဆရာရယ်…….ဝင့်ဝါနဲ့ သော်တာက ရင်ဖွင့်ပြီးသား ဆရာ့ဒစ်ကြီးနဲ့ စမ်းချင်လှပြီ……………….
ဒါဆို2in 1 ဆွဲမလား………မလုပ်ဘူးသေးလို့
အိုကေလေ.. ဝင့်ဝါကို နည်းနည်း ချုပ်လိုက်မယ်…….
မအိကို ချုပ်ဖို့ အချိန်ပေးရင်း အပြင်ခဏထွက် ဆေးလိပ်သောက်….
အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတောာ့…………..မအိက မျက်စိမှိတ်ပြသည်……..
ဆေးလိပ် ဗူး သိမ်းသလိုလိုနှင့် ဆေးတလုံးထုတ်သောက်လိုက်သည်……. မအိက အတွင်းခံလေးနဲ့ အဆင်သင့်…
လာပါ ဝင့်ရယ်တချီပြီးမှ ဆက်စားကြမယ်…………
မူးနေလို့လား မသိ….အကုန် မြူးနေကြသည်….
နှစ်ယောက်လုံးကို ပက်လက် လှန်ခိုင်းပြီး…………… သေချာ ယှဉ်ကြည့်လိုက်သည်.။
ဝင့်ဝါစက်ဖုတ်လေးက တကယ့်ကို ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းသည်.
မအိပြေတာဖြစ်နိုင်သည်……….သူ့စောက်ဖုတ်လေးကလည်း ဖောင်းကားနေသည်…… ပက်လက်လေး လှန်နေသော ချစ်သူကို …………….ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တော့လို့
လက်တဖက်ကလည်း………….မအိ စက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်…
ခဏနေသော…….. video တွေထဲက အတိုင်း……… နည်းမျိုးစုံ လုပ်ကြည့်လိုက်သည်….
မအိ အပြု အစုက တကယ်ကျွေလောက်သည်………..မှုတ်ပေးတာ အတော်ကောင်းသသည်. ဒစ်ကို လျှာနဲ့လျှက်တာ သူများနှင့် မသူ……..သူ့လျှာက တော်တော် သွက်သည်……..
ဘောကို လက်လေးနဲ့ ပွတ်ပေးတာလည်း အရမ်း ဇိမ်ရှိ……..
နှစ်ယောက်လုံးကို ခုတင်ပေါ် လက်ထောက်ခိုင်းပြီး…….တဖုတ်ကို လိုးလိုက်
တဖုတ်ကို ပွတ်ပေးလိုက်….လက်ထည့်မွှေလိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း ………..အလုပ်ကို ရှု့ပ်ချက်ခတ်နေသည်…….
မအိရဲ့ အငမ်းမရ အသံက ပိုအားရစေသလို ဝင့်ဝါ ညည်းသံလေးကလည်း လီးကို ပိုတောင်စေသည်……… ထိုနေ့ညက ငါးချီလောက် လုပ်ဖြစ်သွားသည်…။
အစက တညဘဲ အိပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပေမယ့် နောက်တရက် မနက်အစောကြီး မထနိုင်လို့ နေ့လည်ဘက် အလုပ်ဆက်လုပ်ကာ………တည ဆက်အိပ်လိုက်ရသည်.။
တောင်ကြီးသွားဖို့ ကားစင်းလုံးသာ ဌားလိုက်သည်……။
တကယ်တမ်း ဆေးအကူအညီနဲ့ လိုးရတာက လိုးနေတုန်း မသိသာ……
ပြီးသွားရင် အတော်လေး အားကုန်သည်……..
နှစ်ညပေါင်း ၇ ချီလောက်ဆိုတော့ ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ အိပ်ပျော်သွားသည်…….
ဲဒီလိုနဲ့ ခရီးက ပြန်ရောက်တော့..
အလားအလာရှိနိုင်မယ့် Product အသစ် နှစ်ခုလောက်ကို အထက်ကို တင်ပြဖို့ plan တွေဆွဲ……….ိအလုပ်ရှု့ပ်လှသည်….။
နယ်က ဖြန့်ချီသူတွေ အတွက် အထူး promotion plan စတော့ ရောင်းအားက သိသိသာသာ တက်လာသည်..။ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကိုယ့်အားသက်ချက် ဖြစ် အသုံးချလို့…… ထိရောက်မှုက အရမ်းမြန်သည်..။ တပါတ်လောက် ကြာသွားမှ အတော်လေး ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်သွားသည်…။
တရုံးလုံးမှာလည်း မလိုးရသေးတာ ဆိုလို့……….. သော်တာ တစ်ယောက်ဘဲ ကျန်တော့တယ်….။
သောကြာနေ့ဆိုတော့ ထုံးစမ်း အတိုင်း……လက်စဖြတ်စရာလေးတွေ လက်စဖြတ်နေရင်း. လူရိပ်မြင်လို့ ကြည့်တော့ မှ သော်တာ
ဖုန်းကွဲသွားလို့ အသစ်ဝယ်ချင်လို့………….လစာထဲက ပြန်ဖြတ်ပေးပါ…..။
်အစ်ကိုမှ အခုတော့ မပါဘူး
ညီမ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်မှ ပြန်ပေးပါ………………..
ကလေးတစ်ယောက်လို ပျော်သွားသော သော်တာက……….
ကျနော့် နဖူးကို လာနမ်းပြီး
အဲဒါကြောင့် အစ်ကိုကို ချစ်တာသိလားဆိုပြီး ဖင်လေးခါပြီး အခန်းအပြင်ဘက် ထွက်သွားတော့ အားမလို အားမရ ဖြစ်မိသေးသည်…..။
ညနေ ရုံးက အပြန်….. သော်တာကို ခေါ်လာခဲ့သည်.။
အစ်ကို အခန်းက လည်း ချစ်စရာလေးနော်
အစ်ကိုလည်း တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ ပျင်းနေတာ
စနေ တနင်္ဂနွေ လာနားလို့ရတယ်………..
ခဏလေး အစ်ကို ရေချိုးလိုက်အုံးမယ်
ထွက်သွားသော သော်တာ နောက်ပိုင်းကို မှန်းပြီး လိုးရတာ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့ ဒီတခါတော့ အားရပါးရ…………… တကယ် ဖြစ်မြောက်တော့မည်ဟု ထင်နေလို့လား မသိ…….ညီလေးက တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်.။
ရေချိုးခန်းထဲဝင်……….. ရေအမြန်ချိုးပြီး.. ညီလေးကိုပါ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားလိုက်သည်…..။
သော်တာကြည့်ရတာ အတွေ့အကြုံတော့ နည်းမည့်ပုံ.အနေအထိုင်ကလည်း အခြားသူတွေထက် သာရင် အေးဆေးသည်..။
ရေချိုးပြီးထွက်လာတော့..သော်တာ တစ်ယောက် မီးဖိုချောင်ထဲ အလုပ်ရှုပ်နေသည် နောက်နား ကပ်သွားရင်…….
ရှိတာလေးတွေ နဲ့ အဆင်ပြေအောာင် စီစဉ်နေတာအစ်ကို…. ဒါနဲ့ အစ်ကို သောက်အုံးမှာလား………….အမြည်းပါ လုပ်ထားလိုက်မယ်………
ခေါင်းကို အသာပုတ်………..အခန်းထဲဝင် အဝတ်အစားလဲလိုက်သည်. အောက်ခံ ဘောင်းဘီ မဝတ်တော့ဘဲ boxer အတိုလေး ဝတ်ထားလိုက်သည်.။
ပြီးရင် ညအိပ်ဝတ်စုံဝတ်ပြီ အိပ်လိုက်လေ……..ကွာ……။
အပြင်မှာ အကျီ ချိတ်ထားပေးတယ်နော်
ဟုတ်အစ်ကို ဆိုပြီး….တံခါးလေး ပွင့်လာသည်
အပြင်ဘက်က ရိပ်ခနဲ သူ့အပေါ်ပိုင်းပုံလေး ပေါ်လာတော့
လီးက ဆတ်ကနဲ တောင်လာသည်……။
ခဏနေတော့ ဧည့်ခန်းမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်အောာင်……..
ရေချိုးခန်းထဲက ညအိပ်ဝတ်စုံလေးနှင့် ထွက်လာသော ………..သော်တာ့ကို ပြေးဖက်ချင်လောက်အေငါ်ှ ချစ်စရာ ကောင်းသည်……။
ထိုင်…………..နည်းနည်း တော့ သောက်ကွာ
အစ်ကို တစ်ယောက်တည်း ဆို ပျင်းလို့……………..အချိုလေး စပ်ပေးမယ်…..
အစ်ကို ဆေးလိပ် သွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်…
ရတယ် အစ်ကို ………ကိစ္စ မရှိဘူး.
ကြိုက်တဲ့ အခွေသာ ရွေးကြည့်တော့……….
ထားခဲ့တဲ့ ဇတ်ကားအားလုံးက half ကားတွေချည်းဘဲ……….
ပြန်လာတော့……………ထိုင်းကားလေးနဲ့ ငြိမ့်နေတာ တွေ့တယ်
ဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်ပေးရင်း ….ခန္စာကိုယ်ကို ဆွဲဖက်ထားလိုက်တယ်…..
ညီမကို မြင်မြင်းချင်း …………….သဘောကျမိတာ သိလား
ညီမနဲ့က အခွင့်အရေး မပေးတော့…………. တခါမှ အေးဆေး မတွေ့ရဘူး…… သွားပါ အစ်ကိုရာ…..
အစ်ကို သော်တာနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ ညီမတွေ့ပါတယ်………
တရက် ညီမ အပြင်က ပြန်လာတော့…………….အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာနဲ့ အသံမပေးဘဲ toliet ဝင်ချင်လို့ သွားတာ……………..အစ်ကိုနဲ့ သော်တာ ရုံးခန်းထဲမှာ လုပ်နေတာ တွေ့တယ်လေ. ရှက်သွားမှာ စိုးလို့ မသိချင်ယောာင်ဆောင်ပေးနေတာ………။
ဟုတ်တယ်……အစ်ကိုက လူကြီးဖြစ်ပြီး မှားတာပါကွာ…
အငယ်တွေကို မြူဆွယ်သလို ဖြစ်နေတာ……………….ကိုယ်လည်း တကယ်လူဆိုးဖြစ်နေပြီ……. မဟုတ်ပါဘူး………
သူ့တို့ဘာသူတို့ ခံချင်လို့ ခံတာဘဲ………….
သော်တာ အဲဒီလောက် နှုတ်ရဲလိမ့်မယ်ဟု မထင်………
ဒီလိုဆိုတော့လည်း သိပ် အကွက်ချစရာ မလိုတော့လို့ ထင်၍
အဲဒါကြောင့် ဒီနှုတ်ခမ်းလေးကို ချစ်တာ သိလားဆိုပြီး
တုန့်ပြန်မှု ကောင်းလွန်းသော………..သော်တာ အနမ်းအောက်မှာ
အောက်က ညီလေးက ခေါင်းတဆတ်ဆတ်နှုင့် မွန်းကြပ်လွန်းသော ဘောင်းဘီ အောာက်က ထိုးထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်………….။
နမ်းရင်း က ညအိပ်ဝတ်စုံလေးကို လှန်လိုက်သည့်အခါ……………….
လှပလွန်းသည့် ရင်မွှာ နှစုံထက်က ပန်းနုရောင် နို့သီးခေါင်းလေးကို……………တွေ့ရသည် မနေနိုင်တော့လို့ အသာလေး စွဲစုပ်လိုက်သည်……..
လက်တဖက်က အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးရင်း………… နို့လေးကို အသာလေး နယ်လိုက်
စီးကျလာသော စောက်ဖုတ်အရည် အနံ့က သားရည်ယိုစရာ
ခေါင်းလေးကို အသားလေး ရှိူ ဝင်ပြီး……………… နှုတ်ခမ်းလေးသားလေးကို စုပ်လိုက် လျှာအပြားလေးကို ယက်ပေးလိုက်နဲ့……….
အစိနှင့် မထိထိအောင်……………ခါးလိုက်ကော့ပေးနေသော…………..သော်တာကို မညင်းဆဲရက်တော့ အစိလေးကို ငုံပြီး……..ကစားပေးလိုက်သည်………..
ဆောက်ဖုတ် က အရည်တွေ စိုရွှဲနေမှတော့ မထူးတော့ပါဘူး ဆိုပြီး…………….. လီးဒစ်ကို အသာလေးတေ့ပြီး စဆော်ပေးလိုက်သည်….။
video ထဲမှာ စော်တဗွေကို ဘဲနှစ်ဗွေက ရှေ့တစ်ပေါက် နောက်တစ်ပေါက် လုပ်နေတာ မြင်ပြီး သော်တာက
အစ်ကို နောက်ပေါက် လုပ်ဖူးလား………
ညီမ တခါမှ မခံဖူးသေးဘူး………
သူ့ဘက်က မီးစိမ်းပြတာနဲ့…….အောက်က ညီလေးက အဆင်သင့်
ဖင်ဝကို စက်ဖုတ် အရည်လေး သုတ်ပေးလိုက်သည်…….. ပြီးတော့ တံတွေးကို လီးထိပ်မှာ စွပ်ရင်း ထည့်ကြည့်သည်……………
သူလည်း အစွမ်းကုန် ဖြဲပေးထားတော့……………
ရတယ် အစ်ကို ထည့်မှာသာ ထည့်စမ်းပါ………….
အထဲက အရမ်း ယားနေပြီ………..
ဝင်အောင်ထည့်ပြီး အားရပါးရ ဆောင့်နော်………….
ဒစ်ဝင်သွာားတော့ ခါးအားကို သုံးပြီး ဖင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ကာ အတင်းဆောာင့်ထည့်လိုက်သည်……….
ဆောင့်………………..နို့ကို ဆွဲပြီး ဆောင့်စမ်းပါ……….
အသံတတွတ်တွတ်နှင့် ဖီးလ်တက်နေသော သော်တာကို ကြည့်ပြီး
ကိုယ့်လည်း လုပ်ရှားမှု နှုန်းတင်လိုက်သည………..
သော်တာ ဖင်က လိုးခဲ့ဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်ဆုံးဘဲ
အမြဲလိုးရအောင်နော်……ဆိုပြီး သူဖီးတက်အောင် ပြန်ပြောပေးပြီး
ဆယ်ငါးမိနစ်လောက် ကြာတော့ ပြီးသွားသည်………
နှစ်ယောက်သား ဖက်အိပ်ပြီး……မနက် အတော် နေမြင့်မှ ထဖြစ်သည်…။
သူတို့နှင့်က လင်မယားလို ဖြစ်နေသည်…………
စိတ်ပျော်၍လား မသိ……….ရောင်းအားက အရမ်းတက်သည်…………..။
မအိလည်း AM အဖြစ် ရာထူး တိုးပေးလိုက်သည်……
ကျန်တဲ့ လူတွေလည်း………လစာအကုန် တိုးသည်……….။
ခက်သည်က……………… ကိုယ်တိုင်ပါ ရာထူးတိုးသည်…..။
Department Manager ဘဝက နေ National Sales Manager အဖြစ်……….ရာထူးတိုး၍ ရုံးခန်းပြောင်းရမည်
ကိုယ့်တပည့်မလေးတွေနှင့် ခွဲရမည်ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ တော့ မကောင်း
ခွဲချိန်တန်လို့ ခွဲရမည် ဆိုတေ့လည်း ……မတတ်နိုင်…….
သူတို့ Department ကို သွားဖို့……….. မန်နေဂျာ အသစ်အတွက်ပါ စီစဉ်ပေးရင်း
ရာထူးကြီးတော့……. တွေ့ရသည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ပိုပြီး ဘိုဆန်လာသလို ခံစားရသည်…..။
ဇတ်လမ်းလေးကို ဒီမှာဘဲ ရပ်ထားလိုက်ပါသည်………….။
နောက်တပိုင်းကျမှ နောက်ထပ် ဘဝတွေကို ဆက်ရေးပါ့မယ်.။
ကျုပ် ပြန် တော့ မယ်